Isutagga Imaaraatka Carabta - Tilmaanta Kordhinta | Dubai & Abu Dhabi
Ka shaqeynta Dubai ujrooyinka - Dakhliga, soo bandhigyada [+ qiimaha, lacagta]
Published by Shirkadda Dubai City at September 27, 2019
Imaaraadka Carabta Emirates - Tilmaanta loogu talagalay qarashyada. Abu Dhabi waa midka ugu weyn ee toddobada safaaradood oo leh dhul ballac ah oo ah kiiloo mitir laba jibaaran 67,340, una dhiganta boqolkiiba 86.7 ee guud ahaan aagga waddanka, marka laga reebo jasiiradaha. Waxay leedahay xeeb dhererkeedu yahay in ka badan kiiloomitir 400 oo loo kala qaybiyey ujeeddooyin maamul saddex degmo oo waaweyn.
Gobolka ugu horreeya wuxuu ku wareegayaa magaalada Abu Dhabi oo labadaba ah caasimaddi amiirka iyo caasimadda federaalka. Sheikh Zayed, Madaxweynaha UAE halkan ku nool Dhismooyinka baarlamaanka ee ay ku kulmaan golaha wasiirrada federaalka, inta badan wasaaradaha federaalka iyo xarumaha, safaaradaha shisheeyaha, xarumaha warfaafinta ee dowladda, iyo inta badan shirkadaha saliidda waxay sidoo kale ku yaalliin Abu Dhabi, oo sidoo kale ah hoyga Jaamacadda Zayed iyo Sare. Kulliyadaha Farsamada.
Xarumaha waaweyn ee kaabayaasha waxaa kamid ah Mina (Port) Zayed iyo Abu Dhabi International Airport. Magaaladu waxay kaloo leedahay garoon dhaqameed aad u ballaaran, isboorti iyo waqti firaaqe, oo ay la socdaan Abu Dhabi Corniche oo si cajiib leh u siiya masaafo badan oo safarro aan dhibaato lahayn, baaskiil wadida, orodka iyo orodka badan ee xeebta jasiiradda Abu Dhabi. Qaab dhismeedka qaab dhismeedka magaalada sidoo kale waa soo jiidasho leh meel halkaas oo dhismayaashii hore sida masaajiddo yaryar la xafiday oo ay si deggan ugu fadhiistaan ​​hooska dabaqyada casriga ah ee mustaqbalka.
Gobolka labaad ee Abu Dhabi, oo loo yaqaan Gobolka Bariga, wuxuu magaalo madax u yahay Al Cayn. Aaggan wax lagu beero ayaa hodan ku ah dhirta cagaaran oo leh beero badan, beero nasasho iyo goobo muhiim ah oo qadiimiga ah. Waxaa sidoo kale lagu barakeeyey khayraadka biyaha dhulka ku jira oo aad u badan kuwaas oo ku daaqma ceelal badan oo artesian ah. Qodobbada xiisaha gaarka ah u leh gobolkan waa Ain Al Faydah Park, Jebel Hafit, barta firaaqada ee Al Hili, Al Ain Zoo iyo Matxafka Al Ain. Tani sidoo kale waa xarun dhaqameed iyo waxbarasho iyo goob ay ku yaal jaamacadda koowaad ee UAE, Jaamacadda UAE, oo ay kujirto kulliyadeeda badan iskuul caafimaad oo firfircoon. Gaadiidka gudaha waxaa fududeeya shabakad waddo heer sare ah iyo Al Ain waxay ku xiran tahay adduunka dibedda iyadoo loo sii marayo garoonka diyaaradaha Al Ain International Airport.
Isutagga Imaaraatka Carabta - Tilmaanta Kordhinta!
Gobolka Galbeedka gudaha UAE
Gobolka Galbeedka, waaxda maamulka sadexaad ee safaaradu, waxay kakoobantahay 52 tuulo waxayna leedahay caasimadeeda Bida Zayed, ama Zayed City. Xawaare balaadhan ayaa daboolaya ugu yaraan hektar 100,000, oo ay ku jiraan in kabadan 20 milyan oo welgaaga ah. Goobaha shidaalka ee xeebaha ugu muhiimsan ee dalka ayaa ku yaal halkan, sidoo kale warshada saliida ee ugu weyn dalka, Al Ruwais.
Marka laga soo tago saddexda gobol ee ugu waaweyn ee Abu Dhabi waxaa jira dhowr jasiiradood oo muhiim ah oo ku yaal imaaratka oo ay ka mid yihiin Das, Mubarraz, Zirku iyo Arzanah, oo u dhow halka ay ku yaalan dhulalka shidaalka ee xeebaha ugu weyn. Meelaha ku dhow dhow waa Dalma, Sir Bani Yas, Merawah, Abu al-Abyadh iyo Saadiyat, iyo jasiirado kale oo badan.
Emirate of Dubai wuxuu kusii fidaayaa dhanka Xeebta Gacanka Carbeed ee UAE qiyaastii xNUMX kilomitir. Dubai waxay leedahay aag c. Kiiloomitir laba jibaaran 72, oo u dhiganta boqolkiiba 3,885 ee guud ahaan dalka, marka laga reebo jasiiradaha.
Magaalada Dubai waxaa lagu dhisay geeska dhererkiisu yahay 10-kiiloomitir dherer ah, dabayl dabayl ah oo u qaybisa qaybta koonfureed ee Bur Dubai, oo ah wadnaha dhaqameed ee magaalada, laga soo bilaabo aagga waqooyiga ee Deira.
Xafiiska Ruler, oo ay weheliso xafiisyo badan oo madax ah shirkadaha waaweyn, Port Rashid, Xarunta Ganacsiga Dunida Dubai, kastamyada, xarumaha warfaafinta iyo maamulka boostada ayaa dhammaantood ku yaal Bur Dubai. Deira waa xarun ganacsi oo kobcaysa oo ay ku jiraan dukaamo tafaariiqeedyo aad u ballaaran, suuqyo, huteello iyo Madaarka Caalamiga ah ee Dubai. Bur Dubai iyo Deira waxay isku xiraan buundooyinka Al Maktoum iyo Al Garhoud, iyo sidoo kale tunkarka Al Shindagha kaas oo mara dhulka hoostiisa.
Jebel Ali, oo ah hoy deked aad u weyn laga sameeyay, ayaa leh aagga ganacsiga xorta ah ee ugu weyn ee ay leedahay Carabtu waligeedba waa ay sii kordheysaa liisaska shirkadaha caalamiga ah ee u adeegsada aagga wax soosaarka iyo qeybta dib u habeynta.
Xeebta Jumeirah waa aag dalxiis oo weyn oo leh abaalmarino aad u tiro badan oo lagu guuleysto hoteello iyo xarumo isboorti.
Gudaha, magaalada buuraha leh ee Hatta waa goob aad u soo jiidasho leh. Hagaarka kaydka harada, Hatta Fort Hotel waxaa loo dajiyay dhul ballaadhan waxayna siisaa saldhig kufilan sahaminta wadis iyo buuro dhow, oo kusii fidsan dhulka Omani.
Imaaraatka Sharjah wuxuu ku fidiyaa ilaa xNUMX kilomitir oo xeebta gacanka Imaaraadka ee UAE iyo in kabadan xNUMX kiiloomitir gudaha gudaheeda. Intaas waxaa sii dheer waxaa jira saddex dhawaaqyo oo ay leedahay shirkadda Sharjah oo ku taal xeebta bari, oo xuduud la leh Gacanka Cumaan. Kuwaani waa Kalba, Khor Fakkan iyo Dibba al-Husn. Imaaraadku wuxuu leeyahay aagag kilomitirkeedu yahay 16 kilomitir, taas oo u dhiganta boqolkiiba 80 boqolkiiba guud ahaan dalka, marka laga reebo jasiiradaha.
Magaalada caasimada ah ee Sharjah, oo ka gudubta Gacanka Carbeed, waxa ku jira xarumaha waaweyn ee maamulka iyo ganacsiga oo ay weheliso barnaamijyo dhaqameed iyo dhaqameed aad u xiiso badan, oo ay ku jiraan matxafyo dhowr ah. Astaamaha gaarka ah waa labada sof ee waaweyn ee daboolan, kana tarjumaya qaabeynta Islaamka; dhowr goobood oo madadaalo ah iyo baagag dadweyne sida Al Jazeirah Fun Park iyo Al Buheirah Corniche. Magaalada ayaa sidoo kale caan ku ah masaajidooyinkeeda quruxda badan. Xiriirka lala yeesho dunida ka baxsan waxaa bixiya garoonka caalamiga ah ee Sharjah iyo Port Khalid.
Sharjah sidoo kale waxay ka mid tahay meelaha ugu mihiimsan ee geed-biyoodka, kuwa ugu caansanna waa Dhaid halkaasoo khudaar iyo miro baaxad leh lagu beero ciiddeeda hodanka ah iyo kuwa bacrinsan. Khor Fakkan wuxuu siiyaa Sharjah deked weyn xeebta bari. Laba jasiiradood oo xeebaha ku teedsan ayaa iska leh Sharjah, Abu Musa, oo ay gacanta ku haysay militariga Iran tan iyo 1971, iyo Sir Abu Nu'air.
Ajman, oo ku yaal masaafo gaaban waqooyi-bari ee magaalada caasimada ah ee Sharjah, waxay leedahay dherer qurux badan oo ah 16-kilomitir oo xeebta ciidda cad ah. Waa Emirate yar marka loo eego cabirkeeda jir ahaaneed, oo daboolaya qiyaastii kilomitir laba jibaaran oo ah 259, oo u dhiganta boqolkiiba 0.3 ee guud ahaan aagga guud ee dalka, marka laga reebo jasiiradaha.
Magaalada caasimada ah, Ajman, waxay ku leedahay qalcad taariikhi ah xarunteeda. Tan ayaa dhowaan la dayactiray oo hadda leh matxaf soo jiidasho leh. Xafiiska Rafanka ka sokow, shirkado kala duwan, bangiyo iyo xarumo ganacsi, amiirka ayaa sidoo kale lagu barakeeyey deked dabiici ah oo Dekada Ajman ku taal. Masfut waa tuulo beereed oo ku taal buuraha 110 kiiloomitir dhinaca koonfur-bari ee magaalada, halka aagga Manama uu qiyaastii ujiro kiiloomitir 60 dhinaca bari.
Emirate of Umm Al Qaiwain, oo leh xeeb dhererkeedu yahay ilaa xNUMX kiiloomitir, waxay ku taal xeebta Gacanka Carbeed ee Imaaraatka, inta u dhaxaysa Sharjah ilaa koonfur-galbeed, iyo Ras al-Khaimah oo waqooyi-bari ah. Xudduudkeeda gudaha waxay u jirtaa qiyaastii xNUMX kilomitir oo u jirta xeebta ugu weyn. Isku-darka guud ee imaaraduhu waa qiyaastii kiloomitir laba jibaaran oo 24 ah, taas oo u dhiganta boqolkiiba 32 boqolkiiba guud ahaan dalka, marka laga reebo jasiiradaha.
Magaalada Umm Al Qaiwain, oo ah magaalo madaxda safaaradda, waxay ku taal dhul cidhiidhi ah oo hareeraha dhererkiisu yahay 1 kiloomitir ballac ballaaran oo dhererkiisu yahay 5 kiiloomitir. Xafiiska Ruler, xarumaha maamulka iyo ganacsiga, dekada ugu weyn iyo Xarunta Cilmi baarista Kaluumeysiga ee kalluunka iyo kaluunka lagu habeeyo iyadoo lagu saleynayo tijaabooyin, halkan ayey ku yaalliin. Magaaladu sidoo kale waxay leedahay hadhaagii keydka gaboobay, oo ah irdaheeda ugu weyn ee ay ku dhegan yihiin cannons difaaca.
Falaj al-Mualla, oo ah dhul dabiici ah oo soo jiidasho leh, waxay ku taalaa xNUMX kiiloomitir koonfur-bari ee magaalada Umm Al Qaiwain. Jasiiradda Sinayah, oo u jirta meel masaafo gaaban u jirta xeebta waxay leedahay aagag muhiim ah oo ay kujiraan gumeysteyaal xeebaha Socotra.
Ras Al Khaimah, oo ah waqooyiga waqooyi-bari xeebta UAE ee xeebta galbeed, waxay leedahay xeeb dhererkeedu dhan yahay xNUMX kiiloomitir dhinaca gacanka carbeed, oo ay taageerayaan dhul wanaagsan, oo leh dhawaaq gooni ah oo ku taal wadnaha buuraha Hajar illaa koonfur-bari. Labada qaybood ee Emirate-ka waxay xuduudo la wadaagaan Sultanate of Cumaan. Marka laga soo tago dhulkeeda ugu weyn, Ras Al Khaimah waxay leedahay dhowr jasiiradood oo ay ku jiraan kuwa Greater iyo Yaryar Tunb, oo ay Iran haysato ilaa 64. Aagga Imaaraatku waa kiiloo mitir laba jibaaran ee 1971, kaasoo u dhigma boqolkiiba 168 boqolkiiba guud ahaan dalka, marka laga reebo jasiiradaha.
Magaalada Ras Al Khaimah waxaa loo qaybiyaa laba qaybood by Khor Ras Al Khaimah. Qaybta galbeed, oo loo yaqaan Old Ras Al Khaimah, waa Matxafka Qaranka Ras Al Khaimah iyo dhowr waax dowladeed. Qaybta bari, oo loo yaqaan Al Nakheel, waxay leedahay xafiiska xafiiska 'Ruler', waaxyo dhowr ah oo dowladda ah iyo shirkado ganacsi. Labada qaybood waxay ku xiran yihiin buundo weyn oo laga dhisay khor.
Khor Khuwayr waa gobol warshadeed oo ku yaal qiyaastii xNUMX kiilo mitir dhanka waqooyiga magaalada Ras Al Khaimah. Ka sokow sibidhkeeda weyn, dhagxaanta iyo marbaba, waxay sidoo kale tahay meesha Port Saqr, dekada ugu dhoofinta badan ee imaaraadka iyo degmada kaluumaysiga ee dhaqameed ee Rams. Degmada Digdagga, dhinaca kale, waa aag caan ka ah beeraha waxayna hoy u tahay warshada dawooyinka ee Julphar, oo ugu weyn Gacanka Carbeed.
Xarumaha kale ee muhiimka ah ee ku yaal imaaraadka waxaa ka mid ah: Al-Xamraniah, xarun beeraha iyo sidoo kale meesha ay ku taal Maddaarka Caalamiga ah ee Ras Al Khaimah, Khatt, oo ah goob dalxiis oo caan ku ah il biyoodkeeda, Masafi oo caan ku ah geedka iyo ilaha dabiiciga ah. iyo Wadi al-Qawr, oo ah dooxada soo jiidashada leh ee ku taal buuraha koonfurta.
Marka laga reebo waraaqaha yar yar ee Sharjah, Fujairah waa safaaradda kaliya ee ku taal Gacanka Cumaan. Xeebteeda ayaa dhererkeedu ka badan yahay kiiloo mitir 90 kilomitir ahaanteedana goob istiraatiiji ah ayaa door muhiim ah ka ciyaartay horumarinteeda. Aagga Imaaraatku waa kiiloo mitir laba jibaaran ee 1165, kaasoo u dhigma boqolkiiba 1.5 boqolkiiba guud ahaan dalka, marka laga reebo jasiiradaha.
Magaalada Fujairah, oo ah magaalo madaxdu ku taal imaaraadku, waa xarun si xawli ah u kobcaysa oo ka kooban xafiiska taliyihii, waaxyaha dawlada, shirkado ganacsi oo badan iyo hoteello dhowr ah, iyo garoon diyaaradeed iyo Dekeda Fujairah, oo kamid ah meelaha shidaalka laga qodto ee adduunka. dekedaha.
Astaamaha jireed ee imaaraadka waxaa lagu gartaa buuraha Hajar ee jaranjarada ah ee xaduudka u ah deegaanka xeebta leh ee inta badan degitaanku ka dhacay. Fujairah oo ay ku faraxsantahay muuqaal riwaayado leh, Fujairah waxaa si wanaagsan loogu meeleeyay in ay sii wadato dhismaha ganacsigeeda dalxiis. Soojiidashada waxaa ka mid ah qaar ka mid ah goobaha quusitaanka wanaagsan, quruxda dabiiciga ah ee buuraha iyo xeebta, soojiidashada dhaqanka iyo taariikhiga ah, dabcan, qoraxda lagu kalsoonaan karo.
Magaalada taariikhiga ah ee Dibba al-Fujairah, oo ku taal dhamaadka waqooyiga amiirka, ayaa ah xarun muhiim u ah beeraha iyo kalluumeysiga labadaba, halka tuulada Bidiya ay leedahay masaajid u gaar ah oo afarta ah kaas oo ugu da'da weyn waddanka.
Maxaa dhacaya haddii aad iska diiwaan gelinayso Shirkadda Dubai City
Nidaamka dowladda ee UAE, Madaxweynaha Xiriirka waxaa doorta hay'ad loo yaqaan Golaha Sare ee Xukunka. Golaha Sare waa hay'adda ugu sarreysa dejinta siyaasadaha gudaha Imaaraadka, Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka labadaba waxaa laga soo doortaa xubinnimadooda shanta sano ee la cusbooneysiin karo.
Golaha Sare wuxuu leeyahay awooda sharci dejinta iyo fulinta labadaba. Marka laga soo tago qorsheynta iyo ansixinta shuruucda federaalka, Golaha Sare wuxuu oggolaadaa Madaxweynaha uu soo magacaabay Raiisul Wasaaraha wuxuuna diyaar u yahay inuu aqbalo is casilaadiisa, haddii loo baahdo.
Ra'iisul Wasaaraha waxaa magacaaba Madaxweynaha. Isaga ama iyada kadib waxay magacaabaan Golaha Wasiirrada, ama Golaha Xukuumadda, si ay u kormeeraan horumarka iyo hirgelinta siyaasadaha federaalka ee dhammaan xilalka dawladda.
Marka lagu daro Golaha Sare iyo Golaha Wasiirrada, xubin ka tirsan X-XXX oo loo yaqaan Golaha Qaranka ee Federaalka (FNC) ayaa waliba baaraysa shuruucda cusub ee la soo jeediyay waxayna talo ka siisaa Golaha UAE, sidii loogu baahdo. FNC waxaa awood loo siiyay inay soo wacdo oo ay su’aal gasho wasiirrada marka la eego wax qabadkooda, iyagoo siinaya darajooyin dheeraad ah oo lagula xisaabtamo nidaamka. Horumarinta dhulka hoostiisa si loo furo go'aan qaadashada waxaa la sameeyay bishii Diseembar 40, iyada oo doorashadii dadban ee ugu horeysay ee xubnaha FNC. Markii hore, dhammaan xubnaha FNC waxaa magacaabay Taliyeyaasha Imaaraad kasta.
Soo bandhigista doorashooyinka dadban waxay mataaneysaa bilowga hanaan lagu casriyeynayo nidaamka dowladeed ee UAE. Dib-u-habeeyntaan, Maamulayaasha shaqsiyadeed waxay xushaan kuliyad doorasho oo xubnaheeda guud ahaan ay yihiin 100 jeer tirada xubnaha FNC ee uu qabtay Emirate-ka. Xubnaha koleej kasta waxay dooranayaan kala bar xubnaha FNC, halka kala badhna ay sii wadaan magacaabista Taliye kasta. Hawshu waxay dhalisay FNC oo shan meelood meel xubnaha ka mid ahi ay yihiin haween.
Hawlaha mustaqbalka ayaa la filayaa inay ballaariso baaxadda FNC oo ay xoojiso is-dhexgalka ka dhexeeya iyada iyo Golaha Wasiirrada, si loo sii wanaajiyo hufnaanta, isla-xisaabtanka iyo nooca ka-qaybgalka dowladda ee Imaaraadka. Bishii Nofeembar 2008, shuruudaha xubnaha FNC waxaa laga kordhiyey laba illaa afar sano, taas oo si aad ah ula socota baarlamaaniinta kale ee adduunka. Intaas waxaa sii dheer, dowladda ayaa u warbixin doonta FNC wixii ku saabsan heshiisyada caalamiga ah iyo heshiisyada la soo jeediyo, heshiisyadaasna waxaa ka wada hadli doona FNC kahor ansaxintaas.
Taariikh ahaan, jawiga siyaasadeed ee UAE waxaa lagu gartaa kalgacal weyn oo uu uleeyahay hoggaanka dalka iyo hay'adaha dowladda. Tani waxay inteeda badan jawaab u tahay koritaanka degdega ah iyo horumarka ay Imaaraadku ku la kulmeen hagitaankooda sannadihii ugu dambeeyay.
Taariikhda & Dhaxalka UAE
Ninku wuxuu degay dhulka hadda loo yaqaan Imaaraadka Carabta (UAE) boqolaal kun oo sano, runtiina, deegaanka waxaa laga yaabaa inuu door muhiim ah ka ciyaaray socdaalka nin hore ee Afrika uga tegey Aasiya. Muddo kadib ayaa jawigu si weyn isu beddelay. Qiyaastii sannadihii 7500 sano ka hor, jawigu wuxuu ahaa mid aan wanaagsanayn oo waxaa jira caddayn la taaban karo oo ku saabsan degganaanta aadanaha, laakiin qiyaastii 3000 xaaladihii hore ee BC waxay noqotay mid aad u oomaneyd, iyadoo natiijada ay ahayd in beeruhu ay inta badan ku koobnaadaan bulshooyinka fareeshka ah.
Ganacsiga badeecadaha ayaa la aasaasay marxalad hore oo naxaasna waxaa laga raray buuraha Hajar loona wareejiyay xarumaha magaalooyinka ee waqooyiga ilaa horaantii 3000 BC, halkaasoo loo dhoofiyey Mesopotamia. Wadooyinka safarka geelu ka soo maro gobolka ee waqooyiga ilaa koonfurta waxay kaloo bixiyeen wado kale oo India ah. Dekadaha sida Julfar (Ra's al-Khaimah) ugu dambeyntii waxay noqdeen suuqyo soo wanaagsanaanaya, taas oo si weyn ugu mahadcelineysa ganacsiga qurxinta.
Qarnigii lix iyo tobnaad, imaatinka Boortaqiiska ee Gacanka ayaa sababay carqalad weyn dekedaha xeebaha bari sida Dibba, Bidiyah, Khor Fakkan iyo Kalba. Hadana bilowgii qarnigii sagaal iyo tobnaad, qabiil maxalli ah, Qawaisim, wuxuu dhistay maraakiib kor u dhaafaya lixdan markab oo waaweyn iyo badmaaxiintii 20,000 - oo ku filan inay ka xanaaqaan weerar Ingiriis ah si loo xakameeyo marinnada ganacsiga badda ee u dhexeeya Khaliijka iyo Hindiya.
Markii la soo maray horraantii 1790s, magaalada Abu Dhabi waxay noqotay xarun luul muhiim ah oo muhiim ah in hogaamiyaha qabaa'illada Bani Yaah, oo ah sheekha Al Bu Falah (faracyadiisa, Al Nahyan, ay yihiin amiirrada hadda jira ee Abu Dhabi), waxaay uga dhaqaaqday Liwa Oasis, qaar kilomitir 150 ah dhanka koonfur-galbeed. Dhowr sano ka dib, xubno ka tirsan Al Bu Falasah, oo ah laan kale oo reer Bani Yaasiin ah, ayaa degay ciiqa magaalada Dubai, halkaas oo ay maanta ka sii wadaan xukunka iyagoo ah qoyska Al Maktoum.
Kalluumeysiga Pearl wuxuu sii waday inuu sii weynaado, laakiin ugu dambeyntii Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, niyad-jabka dhaqaale ee 1930s, iyo abuurista Jabbaan ee luul dhaqameedku waxay keentay in ganacsiga uu hoos u dhaco - oo saameyn ba'an ku yeeshay dhaqaalaha gobolka.
Iyada oo la adeegsanayo 1950s, si kastaba ha noqotee, waxay ku soo baxday helitaanka saliida, iyo 6 Agoosto 1966, Darajadiisa (HH) Sheekh Zayed bin Sultan Al Nahyan wuxuu noqday Taliyihii Abu Dhabi. Markaa waxay bilaabatay wakhti qorshaysan iyo horumar balaadhan, oo Abu Dhabi, iyo ugu dambayntii UAE oo dhami ay bilaabeen inay la qabsadaan dunida inteeda kale marka la eego casriyeynta iyo xoogga dhaqaalaha. Markay ahayd 2 Diseembar 1971, urur dastuuri ah oo ka kooban lix dawladood oo loo yaqaanay Imaaraadka Carabta ayaa si rasmi ah loo aasaasay. Tani waxay ka koobneyd Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, iyo Fujairah. Sheekh Zayed waxaa loo doortay inuu noqdo Madaxweynaha iyo HH Sheikh Rashiid bin Saciid Al Maktoum, Xukumaaha Dubai, inuu noqdo Madaxweyne kuxigeenka. Amiirka toddobaad, Ra's al-Khaimah, wuxuu ku biiray Xiriirka 1972.
Shaki kuma jiro in barwaaqada, wada noolaanshaha iyo horumarka casriga ah ee maanta lagu garto UAE ay yihiin kuwo aad iyo aad u weyn, sababtuna tahay doorka muuqda ee ay ka ciyaareen aabayaashii gobolka aasaasay. 2004, Sheekh Zayed wuxuu ku guuleystay inuu noqdo Madaxweynaha UAE iyo inuu noqdo Amiirka Abu Dhabi wiilkiisa weyn, HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Mabaadi'da iyo falsafadda uu u keenay dowladda, si kastaba ha noqotee, waxay weli ku sii nagaaneysaa wadnaha Xiriirka iyo siyaasadaha maanta. Kadib geeridii walaalkiis, Sheekh Maktoum, 2006, HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Ruler of Dubai, waxaa loo doortay Madaxweyne Kuxigeenka UAE iyo Raiisul Wasaaraha.
Isha laga soo xigtay: UAE2010 Yearbook - Golaha Warbaahinta Qaranka ee UAE
Hoggaanka siyaasadeed ee UAE wuxuu ku shaqeeyaa gudaha qaabdhismeedka siyaasadeed ee ballaaran ee dibedda oo uu aasaasay Madaxweynaha aasaasay ee Xiriirka, HH Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Habkaani wuxuu xoojinayaa diblomaasiyadda, gorgortanka iyo naxariis. Imaaraatka carabta ayaa maskaxda ku haysa sida ay uga go'antahay dariskeeda iyo bulshada caalamka tixgalin ku saabsan nabada gobolka, xasiloonida iyo amaanka dhamaan. Si loo gaaro yoolalkaas, waxay si ula kac ah u dallacday buundooyinka, iskaashiga iyo wada hadalka. Ku tiirsanaanta aaladaha hawlgalka waxay u saamaxday Dowladda inay sii waddo xiriir wax ku ool ah, iskuna dheellitiran oo ballaadhan oo bulshada caalamka ah.
Mabda 'hagaha ee siyaasada arrimaha dibedda ee UAE waa aaminaada baahida loo qabo cadaalad xaga xiriirka caalamiga ah ee ka dhexeeya dowladaha, oo ay kujirto baahida loo qabo ixtiraamka mabda'a fara-gelinta ah ee ku saabsan arrimaha boqortooyooyinka qaramada kale. Imaaraadku sidoo kale waxaa ka go'an xallinta khilaafaadka nabdoon ee khilaafyada, wuxuuna taageeraa hay'adaha caalamiga ah sidii loo xoojin lahaa ku dhaqanka sharciga caalamiga ah iyo hirgelinta heshiisyada iyo heshiisyada.
Mid ka mid ah astaamaha udub dhexaadka u ah siyaasada arrimaha dibedda ee UAE ayaa ah horumarinta xiriirka dhaw ee ay la leedahay jaarkeeda jasiiradda carabta iyada oo loo marayo Golaha Lixda xubnood ee Golaha Iskaashiga Khaliijka (GCC). Intii lagu jiray 2009, horumarka ka socda Falastiin, Ciraaq, Iran, Yemen, Afghanistan iyo Pakistan iyo dadaallada loo baahan yahay in lagula tacaalo ayaa aasaas u ah wadahadalka UAE ee lala yeelanayo hoggaamiyeyaasha adduunka. Imaaraadku wuxuu u heellan yahay nabadda, xasilloonida iyo xasilloonida gobolka Carabta, iyo sidoo kale xiriirka caadiga ah ee ka dhexeeya dhammaan waddamada oo dhan, iyo xallin caddaalad ah oo waarta oo loo helo khilaafka Bariga Dhexe. Waxay aaminsan tahay in nabada aan la gaari karin inta ay qabsashada Israail ee Falastiin iyo dhulalka kale ee carbeed. Waxay taageertaa in la soo afjaro qabsashada Israel iyo sameynta dowlad madax banaan oo Falastiin ah, iyada oo Bariga Qudus ay tahay caasimadeeda, iyada oo lagu saleynayo heshiis ku saleysan Hindisaha Nabadda ee Carbeed.
Imaaraadku wuxuu ku celceliyey tallaabada caalamiga ah ee lagu joojinayo dhismaha degsiimooyinka Yuhuuda ee Daanta Galbeed iyo Qudus si loo soo nooleeyo geedi socodka nabada Bariga Dhexe. Dhanka kale, waxay cambaareysay gardarrada Israa’iil ku hayso marinka Qaza waxayna muujisay wadajirka ay la leedahay Falastiiniyiinta ay saameeyeen dagaalka. Imaaraadku wuxuu ku yaboohay Dh11 bilyan (US $ 3bn) caawinaad siinta falastiiniyiinta, oo ay kujirto lacagaha hormarinta kaabayaasha, guryeynta, isbitaallada iyo mashruucyada iskuulada. Intaa waxaa dheer, waddanku wuxuu ku deeqay Dh638.5 milyan (US $ 174mn) oo loogu talagalay dib-u-dhiska Gaza.
Imaaraadku wuxuu ahaa taageere firfircoon oo ka shaqeeya Dowladda Ciraaq wuxuuna ku booriyay ixtiraamka dhul ahaanta Ciraaq, madaxbanaanideeda iyo madaxbanaanideeda. Xiriirku wuxuu leeyahay mid ka mid ah safaaradaha carabta ee shaqeynaya iyo safiirka deggan Baqdaad, wuxuuna kansal gareeyay deymaha qiimahoodu dhan yahay Dh25.69 bilyan (US $ 7bn) si loo taageero dadaallada dib-u-dhiska Ciraaq. In kasta oo muran dheer uu kala dhexeeyo Iiraan su’aasha ah sedex jasiiradood oo ay wadaagaan UAE iyo welwelka laga qabo barnaamijka Nukliyeerka Iiraan, Imaaraadku wuxuu sii wadayaa inuu furo wadooyin wax ku ool ah oo ka dhalan kara natiijo horseedi karta kalsoonida iyo xasilooni nabadeed oo dhan. arrimaha aan fiicnayn. Xiriirku wuxuu sii wadaa inuu si wax ku ool ah uga qeybqaato dadaallada caalamiga ah ee loogu talagalay xasilinta Afghanistan iyo taageerida dalabkooda ah soo celinta amniga. Waxay siisay US $ 550 milyan oo gargaar bina aadamnimo iyo horumarineed inta u dhaxaysa 2002 iyo 2008 waana dalka kaliya ee Carab ah ee ka fuliya howlaha bani-aadminimo gudaha Afghanistan.
Ka baxsan gobolka laftiisa, siyaasada arrimaha dibedda ee UAE waxay sii wadaa inay la qabato si ay u waafajiso isbedelada isbeddelka ku keenaya bulshada caalamka. Iyada oo qayb ka ah qaabkeeda wax ku oolka ah, waxay dhisi doontaa cilaaqaad laba geesood ah iyo mid laba-geesood ah oo leh warshado soo koraya iyo kuwa soo koraya labadaba iyada oo la xoojinayo xiriirka ay la leedahay xulafadeeda soo jireenka ah ee Galbeedka. Qayb muhiim ah oo ka mid ah siyaasada arrimaha dibedda ee UAE ayaa ahmiyad weyn siisa kobcinta ballaadhinta isku xidhka ganacsiga iyo maalgashiga ee lala yeesho waddamada kale iyo hay'adaha adduunka oo dhan. Xiriirka deg degga ah ee federaalku wuxuu u yahay xarun dhaqaale ee gobolka Bariga Dhexe wuxuu sii adkeeyay oo uu xoojiyay mowqifkiisa xubin ka aha bulshada adduunka.
Sababtoo ah Aasiya waxay u qaadatay dhibaatada qalalaasaha dhaqaale ee dhowaa si guul leh marka loo eego qaybaha kale ee adduunka, waxaa jiray ifafaalo waafi ah oo muujinaya in qaar ka mid ah wadamada waaweyn ee Aasiya ay door muhiim ah ka ciyaaraan adduunka. siyaasadda. Iyagoo ka duulaya isbadalkan, iyo ka tarjumida rabitaanka ah inay sii xoojiso xiriirka, hoggaanka UAE wuxuu sii waday inuu horumariyo xiriirka uu la leeyahay dalal badan oo Aasiya ah, oo ay ku jiraan Shiinaha iyo Hindiya. Mid ka mid ah guulaha diblomaasiyadeed ee weyn intii lagu jiray 2009, oo sidoo kale ka tarjumaya maqaamkiisa caalamiga ah ee sii kordhaya, ayaa yimid markii Abu Dhabi loo doortay inuu martigeliyo xarunta Wakaaladda Caalamiga ah ee Cusboonaysiinta Tamarta (IRENA).
Imaraadka Carabtu waxay daabacday dukumenti siyaasad ah oo ku saabsan tamarta nukliyeerka ee loogu talagalay rayidka, iyadoo la adeegsanayo iyadoo lagu nuuxnuuxsanayo siyaasadeeda hufan iyo u diyaarsanaanta u hoggaansanaanta dhammaan tallaabooyinka la xiriira amniga iyo amniga. Dhanka kale, Golaha Wakaaladda Tamarta Atomiga ee Caalamiga ah ayaa waxay ansixisay ansaxinta UAE ansixinta tallaabooyinka dheeraadka ee baaritaanka nukliyeerka ee loo yaqaan Protocol Dheeraadka ah, kaas oo hubiya ka go'naashaha heshiiskii Nuclear-ka ee Fidinta. Meel kale oo muhiim u ah iskaashiga UAE wuxuu ahaa dagaalka caalamiga ah ee lagula jiro argagixisada, oo ay ku jirto argagixisada ay maalgaliso dowlada.
In kasta oo ay saamaynta xiisadda dhaqaale iyo tan dhaqaale ku yeelan karto dhaqaalaha gobolka iyo mashaariicda horumarineed, Imaaraadku wuxuu sii waday barnaamijyadiisa samafalka, gargaarka iyo barnaamijyada kaalmada horumarineed ee dalal badan. Dadaalkeeda ku aadan ixtiraamkan ayaa waxaa qiray Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon, kaas oo amaaney mowqifkiisa bini aadminimo iyo ka shaqeynta yareynta silica dadka ku nool qeybo kala duwan oo dunida ah xilliyada ay jiraan musiibooyinka dabiiciga ah iyo isku dhacyada aadane.
Aids-ka waxaa lagu soo marsiiyaa dhowr ururo oo muhiim ah, sida Sanduuqa Abu Dhabi ee Horumarinta kaasoo, inta lagu gudajiray 2009, ay taageertay mashaariicda Morocco, Burkina Faso, Tanzania, Bangladesh, Palestine, Benin, Yemen, Afghanistan, Sudan, Eritrea iyo kuwa kale; Hay'adda Bisha Cas (oo ah mid ka mid ah tobanka urur ee xubnaha sare ka ah Guddiga Caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas), oo howlahooda ugu waxtarka badan ay ka mid yihiin bixinta biyo la cabo oo ku yaal waddamada ay ku dhufatay abaarta iyo xaalufinta, qalabeynta isbitaallada meelaha fog ee waddamada saboolka ah, waana inta badan diiradda lagu saaray waxbarashada carruurta ku nool waddamada saboolka ah. Intaa waxaa sii dheer, Noor Dubai, waa hay'ad samafal oo caalami ah oo ka hortagaysa iyo daaweynta indho la’aanta iyo aragtida hoose, waxay iskaashi la sameysaa Ururka Caafimaadka Adduunka iyo Hay'adda Caalamiga ee Kahortagga Indho-la'aanta. Sanadihii ugu dambeeyay, culayska la saaray wuxuu ahaa gargaarka bini'aadannimo ee loogu talagalay dadka ay saameeyeen musiibada dabiiciga ah ama iskahorimaadka iyo saboolnimada.
Isku soo wada duuboo, inta lagu gudajiray sannadihii sedex iyo afartii sano ee la soo dhaafay UAE waxay ku tabarucday in kabadan Dh255 bilyan (US $ 69.4 bn), amaahda, deeqaha iyo caawimaadda waxaa lagu bixiyaa qaab dowladeed-dowladeed, Xiriirku sidoo kale waa oo gacan weyn ka geysan jiray wakaaladaha caalamiga ah, isagoo ka dhigay Dh100 bilyan (US $ 27 bn) oo laga heli karo Sanduuqa Lacagta Adduunka iyo Bangiga Adduunka. Xafiiska Isuduwidda Gargaarka Dibadda ee UAE, oo la aasaasay iyada oo lala kaashanayo xafiiska UN ee Isuduwidda Arrimaha Bani'aadamnimada, ayaa ah gole dhowaan la aasaasay kaas oo u horseedi doona Xiriirka in uu ku sii lug yeesho kaalmada gargaarka dhinacyo badan, halkii uu diiradda saari lahaa taageerada iyada oo loo marayo laba geesoodka dhaqameed. macnaheedu.
In kasta oo xaqiiqda ah in Imaaraadku uu hadda ku sugan yahay xaalad soo kabasho joogto ah, haddana waxaa si weyn saameyn ugu yeeshay xiisadda dhaqaale ee adduunka ee dhowaanta. Si kastaba ha noqotee barkinta bilowga ah ee lagu abuuray qiimaha saliida sare, Xiriirka ayaa ugu dambeyntii saameeyay hoos u dhaca qotada dheer ee adduunka oo sababay hoos u dhaca baahida saliida, oo u jiiday qiimayaasha wax ka yar seddex meelood meel ugu sarreysa bishii 7aad ee 2008. Dib-ula-noqoshada qulqulka weyn ee raasamaalka gaarka loo leeyahay wuxuu horseeday hoos u dhac aad u weyn kuyimid suuqyada saamiyada. Intaa waxaa sii dheer, hoos u dhac ku yimid qaybaha dhismaha iyo hantida, oo ah meelaha ugu waaweyn ee ballaarinta dhaqaalaha ee UAE, ayaa la macno ah in kororka 2009 uu hoos u dhacay sannadihii hore. Bishii Oktoobar 2009, Wasaaradda Dhaqaalaha ayaa saadaalisay koror ah oo kaliya boqolkiiba 1.3 boqolkiiba sanadka.
Tirooyinka 2009 waxay ahaayeen kuwo ka duwan kuwii hore iyadoo la barbar dhigayo kuwa loo yaqaan '2008,' markii kobaca soosaarka guud ee UAE guud ahaan uu gaadhay boqolkiiba 7.4. Hoggaaminta korodhkaasi wuxuu ahaa qaybta saliidda iyo gaaska, taas oo ku kordhisay boqolkiiba 35.6, sababtoo ah badiyaa qiimaha kororka saliidda. Qeybaha kale ee kobaca xoogan ee 2008 waxaa ka mid ahaa warshadaha dhismaha (boqolkiiba 26.1), warshadaha waxsoosaarka (boqolkiiba 17.2), qeybta maaliyadeed (boqolkiiba 15.9), ganacsiga tafaariiqda iyo adeegyada dayactirka (boqolkiiba 18.7), iyo maqaayadda iyo ganacsiga hudheelka (boqolkiiba 15.1).
2008, isku dheelitirka ganacsiga UAE wuxuu kordhay boqolkiiba 35.3, laga bilaabo Dh170.85 bilyan (US $ 46.5 bn) ee 2007 illaa Dh231.09 bilyan (US $ 62.9), sababtuna waxay u tahay boqolkiiba boqol oo ah 33.9 oo kordhay qiimaha dhoofinta iyo dib u dhoofinta iyo boqolkiiba 39.7 oo kordhay qiimaha dhoofinta saliida, oo ay weheliso boqolkiiba xNUMX oo kordhay qiimaha dhoofinta gaaska. Aagagga ganacsiga xorta ah waxay arkeen boqolkiiba boqol oo ah 37.1 oo ah dhoofinta, taas oo gaartay DH16.4 bilyan (US $ 97.46 bn) ee 26.6. Dhanka kale, dib-u-dhoofinta ayaa gaadhay Dh 2008 bilyan (US $ 345.78 bn); kor u kaca boqolkiiba 94.2. Kordhinta baahida gudaha maxaa yeelay kororka dadka iyo heerarka daqliga, oo ay weheliso koboc wanaagsan oo ku saabsan ganacsiga dib-u-dhoofinta, waxay gacan ka geysteen riixaya qiimaha soo dejinta illaa boqolkiiba 33.4 si loo gaaro Dh33.4 bilyan (US $ 735.70 bn).
Sicir bararka kow iyo tobankii bilood ee ugu horreeyay ee 2009 wuxuu istaagay 1.7 boqolkiiba boqolkiiba-hoos u dhac aad u weyn sannadihii hore. Qiimaha guryaha oo hooseeya iyo qiimayaasha cunnada ayaa gacan ka geystay culeysyo dhanka ilaalinta ah oo dhanka dhaqaalaha ah. 2008, sicir bararku wuxuu taagnaa boqolkiiba 10.8, maaddaama dakhliyo badan oo ka soo baxa qiimaha saliidda sare ay sii kaceen kobaca dhaqaalaha, abuurista yaraanta hantida iyo adeegyada. Isla mar ahaantaana, doollarka daciifka ah ee Mareykanka iyo qiimaha cuntada ee adduunka oo dhan ayaa ka dhoofinta wax soo dejinta qaali ah. Nidaamka Bangiga Dhexe ee UAE wuxuu sheegay in la ilaaliyo heerka dulsaarka rasmiga ah ee heerar hoose si loo soo nooleeyo kobaca dhaqaalaha.
Warshadaha iyo Weecinta
Qeybaha aan-lahayn-hydrocarbon waxay xisaabiyeen boqolkiiba 63 ee GDP ee 2008, in kasta oo sicirka saliidda iyo gaaska uu sarreeyay, oo ay ku kordhisay DH 2.16 trillion (US $ 590 bn) dhaqaalaha. Imaaraadku wuxuu rajeynayaa inuu yareeyo ku biirinta qaybta biyo-xireennada qiyaastii 20 boqolkiiba tobanka sano ee soo socota illaa 15 sano iyadoo la dhiirrigelinayo koritaanka meelo kale oo dhaqaalaha ah. Waxsoosaarka iyo warshadaha waxay wali sii ahaanayaan qeybo muhiim ah oo himilooyin ah Isbedelka dhaqaalaha, sameynta qeybaha hore u koray sida aluminiumka, dhoobada iyo dawooyinka.
2009, Abu Dhabi wuxuu daaha ka qaaday aragtideeda '2030 Economic Vision, isagoo dejinaya khariidad waddo loogu talagalay isugeynta dhaqaale ee ballaaran. Shirkadda Horumarinta ee Mubadala, waa istaraatiijiyadda maalgashiga istiraatiijiyadeed ee Dowladda Abu Dhabi, waxay bixineysaa door weyn horumarka gobolka ee warshadaha, oo ay ku jiraan mashruucyada kaabayaasha (qaybaha gaaska diyaaradaha) warshadaha, maalgashiga ganacsiga, tamarta iyo tamashlaha. Abu Dhabi wuxuu sidoo kale diiradda saarayaa ilaha dib loo cusbooneysiin karo ee tamarta iyo shirkadda mustaqbalka tamarta ee dowladda ee Masdar ayaa qayb muhiim ah ka ah istaraatiijiyaddan. Masdar City, oo ay shirkaddu ku sifeysay 'magaaladii ugu horreysay ee carbon-dhexdhexaad ah eber-luminta iyo xarunteeda ee Hay'adda Caalamiga ah ee Cusboonaysiinta Tamarta (IRENA)', ayaa ugu dambeyntii dejin doonta dadka deggan 40,000 iyo dadka raacaya 50,000 maalinlaha ah ee ka shaqeeya qaar ka mid ah shirkadaha shirkadaha tamarta cagaaran ee 1500. Masdar sidoo kale wuxuu si xoog leh maalgashi ugu sameyneyaa tikniyoolajiyadda dhaqso u koraya ee muraayadaha tamarta qorraxda ee dhuuban, kaas oo ay ka mid tahay dhismaha warshad ku taal Abu Dhabi oo awood u leh soo saarida muraayadaha ku filan sanad walba si loo soo saaro meywatt 130
Dubai, iyada oo dib u qaabaynaysa qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee ay dawladu taageerto, waxay sii wadaysaa inay sii dhisto dhismaheeda xoogga weyn ee warshadaha, dalxiiska iyo ganacsiga. Sharjah wuxuu sidoo kale sii wadayaa qorshayaasha horumarinta warshadaha, iyo Hay'adda Maalgashiga ee Ra 'al-Khaimah (RAKIA) waxay qorsheyneysaa inay soo saarto fikrad ah aagagga warshadaha si loo abuuro kooxo waaxeed oo wax soosaarka ah. Fujairah waxay dhiseysaa aag xor ah, oo ah kii ugu horreeyay ee UAE, kaasoo u oggolaan doona shirkadaha caalamiga ah inay sameeyaan ganacsi wax ka yar wixii lagu soo eedeeyay by aag xor ah oo la aasaasay. Intaas waxaa sii dheer, Dowladda UAE waxay ku jirtaa marxaladihii ugu dambeeyay ee diyaarinta sharci warshadeed oo sidoo kale la rajeynayo inay dhiirigeliso abuurista warshadaha qaranka.
Dhowr mashruuc oo waaweyn ayaa lagu dhammeystirey 2009, oo ka mid ah jasiiraddii ugu yaabka badneyd ee Jasiiradda, goob firaaqeed oo ku taal Abu Dhabi iyo garoon ku habboon wareegga Yas Marina, oo martigeliyay Formula One Grand Prix bishii Nofeembar 2009. Nidaamyada ugu weyn ee kaabayaasha halkaasoo la dhammeystirey, oo ay ka mid yihiin Dh28 bilyan (US $ 7.62 bn) Dubai Metro, nidaamka gaadiidleyda aan wadista lahayn ee baahisa qalbiga safaaradaha; Buundada Sheekh Khalifa, oo isku xirta Jasiiradda Abu Dhabi iyo Saadiyat iyo Jas Island; iyo Palm Jumeriah Monorail. Dhismaha ugu dheer adduunka; Burj Khalifa ee Dubai, ayaa la furay usbuucii ugu horreeyay ee 2010.
Dalxiiska waa qeyb muhiim u ah koritaanka dhaqaalaha UAE dhammaanteed. Abu Dhabi iyo Dubai labaduba waxay soo mareen laylisyo dib-u-habeyn ah, iyaga oo diiradda saaraya hudheelo tayo sare leh iyo goobo madadaalo. Laga soo bilaabo jasiiradda kuleylka ah ee Sir Bani Yas ee galbeedka Abu Dhabi, dhuumashada cidlada ah ee Qasr al-Sarab, oo ku taal Liwa Oasis, iyo Al Maha iyo Bab al-Shams oo ku yaal Dubai illaa meelaha xeebta wanaagsan ee Fujairah, Ra's al Khaimah iyo Ajman, Imaaraadku waxay bixiyaan tas-hiilaad wanaagsan oo ku yaal meelo fog iyo qurux badan. Mashaariicda calanka sida Emirates Palace Hotel, Burj al-Arab, Madinat Jumeirah, iyo Bruj Khalifa waxay gacan ka geysteen kor u qaadida sumcadda dalka, iyadoo natiijada ay tahay in Xiriirku waxbadan soo bandhigo xitaa kuwa martida aadka u badan. In kabadan 11.2 milyan oo soo booqdeyaal ah ayaa laga filayaa 2010, iyagoo kaabaya guusha guushii ay Imaaraadku isku dayeen inay kor ugu qaadaan maalgashiga warshadaha soo-dhoweynta.
2009, UAE waxay fuuleen afar iyo toban meelood 'warbixinta' Doing Business 'oo ay soo aruurisay Bangiga Adduunka iyo Hay'ada Maalgelinta Caalamiga ah. Warbixinta caalamiga ah ee la aqoonsan yahay waxay qiimeyneysaa waddamada sida ay ugu fududahay shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah inay ganacsi sameeyaan. Xiriirku wuxuu kor ugu kacay booska soddon iyo saddexaad ee darajada caalamiga ah ee dib-u-habeynta sharciyeynta, qeyb ahaan natiijadii ka soo baxday go'aankii Dowladda ee ay ku baabi'ineysay Dh150,00 (US $ 40,871) ugu yar ee looga baahan yahay raasumaal ganacsi qaar ka mid ah ganacsiyada bilowga ah.
Laba sababood oo kale oo muhiim u ah korodhka UAE waxay ahayd qodista geedi socodka ku lugta lahaa helitaanka rukhsadaha dhismaha iyo horumarinta awooda. ee Dubai dekadaha.
Maalgashiga suuqyada dibedda waxay muddo dheer udub dhexaad u ahayd istiraatiijiyadda Imaaraatka ee UAE si loogu abuuro shabaq nabadgelyo loogu talagalay jiilalka mustaqbalka, gaar ahaan kuwa hal maalin la kulmaya rajada kaydka saliida. Shirkadaha waaweyn ee maalgashiga caalamiga ah ee ka jira Imaaraatka waxaa ka mid ah: Hay'adda Maalgashiga ee Abu Dhabi, Golaha Maalgashiga Abu Dhabi, Invest AD, Shirkadda maalgashiga ee Dubai, Dubai Holding, Dubbe Dubai waxay haysaa Hawlgallada Ganacsi (oo ay kujirto Dubai Properties Group, Sama Dubai, Tatweer, Iyo Kooxda Duabi Holding Group), iyo Dubai World. Intaa waxaa u dheer, Mubadala, Shirkadda Tamarta Qaranka ee Abu Dhabi (Taqa) iyo Batroolka Caalamiga ah Shirkadda Maalgashiga (IPIC) waxay ku raad joogtaa horumarinta tamarta dibadda.
Tallaabooyinka ay qaadaan hay'adaha federaaliga ah ee 2008 si loo soo celiyo kalsoonida nidaamka maaliyadeed, oo ay ku jirto xarunta Bangiga Dhexe ee UAE Dh50-bilyan (US $ 13.6 bn) xarunta si loo taageero deyn bixiyeyaasha maxalliga ah, iyo Wasaaradda Maaliyadda UAE Dh70 bilyan (US $ 19 bn) dareere qorshaha taageerada, waxaa loogu talagalay inay dib u soo amaahdo amaahda, suuqyada saamiyada oo ay kor ugu qaadaan waxqabadka dhaqaalaha. 2008, Dowladda Federaalka ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay sameyn doonto illaa DHX bilyan bilyan (US $ 120 bn) oo loo heli karo bangiyada ku yaal dalka oo dhan iyada oo la adeegsanayo barnaamijyo dhowr ah oo deyn ah, waxayna dammaanad ka dhigaysaa dhigaalka iyo amaahda bangiga muddo saddex sano ah.
Bishii Febraayo 2009, Waaxda Maaliyadda ee Abu Dhabi waxay ku dastay DHX bilyan bilyan (US $ 16 bn) oo lagu daray shan ka mid ah bangiyada ugu weyn ee imaaraadka. Tallaabooyinkan ayaa gacan ka geystey sidii loo adkeyn lahaa xaashiyaha dheelitirka ee bangiyada, in kasta oo macaashka bangigu hoos u dhacay saddexdii bilood ee ugu horreeysay, haddana wasaaradda maaliyaddu waxay diyaarisay guddi maaliyadeed oo degdeg ah si ay uga fiirsato tallaabooyin dheeri ah oo lagu taageerayo deyn-bixiyeyaasha.
Sanadkan gudihiisa, bangiyadu waxay soo sheegeen kororka defafyada iyo bixinta lacagaha ee deynta ganacsiga iyo macaamiisha. Sidaas darteed, bangiyada liiska ee UAE waxay qaateen taxaddar taxaddar leh iyagoo ka warbixinaya bixinta lacag aan caadi ahayn oo ka badan amaahda xun. Si laga caawiyo kaabeynta dheeriga ah ee nidaamka bangiyada, Bangiga Dhexe wuxuu amaahiyey amaah-bixiyeyaasha in laga bilaabo 2010 ay tahay inay u hoggaansamaan shuruucda 'Basel II' ee ku saabsan ku-filnaashaha raasamaalka ee bangiyada ayna fiiro gaar ah u yeeshaan xakameynta iyo maareynta khatarta. Dowladda ayaa sidoo kale ku dhawaaqday qorsheyaal ay ku mideynayso labada deyn ee amaahda ku leh Imaaraatka, Amlak iyo Tamweel. Tan waxaa loo arkaa inay muhiim u tahay soo kabashada suuqa guryaha.
Bixinta amaahda ee laga helo suuqa ay ka heleen goleyaal ay dowladdu leedahay ayaa sidoo kale ahayd diiradda lagu saaray firfircoonaanta 2009. Bishii Febraayo 2009, Dowladda Dubai waxay iibisay Dh36.7 bilyan (US $ 10 bn) oo loogu xiro Bangiga Dhexe si ay uga caawiso shirkadaha gacanta ku haya sameynta bixinta deynta iyo qandaraaslayaasha. Si loo kormeero qeybinta lacagahaas, Sanduuqa Taageerada Maaliyadeed ee Dubai waxaa la aasaasay bishii Luulyo 2009. Markay ahayd 25 Noofambar 2009, Dawladda Dubai ayaa ku dhawaaqday inay deyn ahaan u qoondeysay Dh18.4 milyan (US $ 5 bn) maalgelinta Bangiga Qaranka Abu Dhabi iyo Al Hilal Bank, oo labaduba ay gacanta ku hayaan mid ka mid ah lacagaha ugu badan ee Abu Dhabi, Golaha Maalgashiga Abu Dhabi. Dubai waxay sidoo kale ku guuleysatay inay dejiso tiro deyn badan oo ah 2009, oo ay ka mid yihiin Dh12.47 bilyan (US $ 3.4 bn) dib-u-habeynta deynta shirkadda deynta Borse Dubai ee bishii Febraayo, iyo dib-u-bixinta bilyanka dh3.67 (US $ 1 bn) Maamulka Duulista Rayidka ee Dubai Xiriirka Islaamiga ah ee Noofembar.
Kaydiyada ku xusan Suuqa Dhaqaalaha ee Dubai ayaa dhammaaday sanadka 10.2 boqolkiiba, laakiin wali waxay ka badnaayeen boqolkiiba 70 boqolkiiba halka sare ee sanadkii hore. Kaydka ku saabsan sarrifka lacagaha ee Abu Dhabi wuxuu kor u kacay boqolkiiba 0,5 ee 14.7, laakiin wali wuxuu hoos uga dhacay boqolkiiba 2009 boqolkiiba halka sare ee 46.
Iyada oo qayb yar ka mid ah dhul badeedka qaar ka mid ah deriskeeda Khaliijka, UAE si kastaba ha ahaatee, UAE ayaa si kastaba ha ahaatee waa gobolka afraad ee dhoofinta saliida ceyriinka ah, ka dib Saudi Arabia, Iran iyo Ciraaq.
Imaaraadku wuxuu leeyahay kaydka lixaad ee ugu weyn dunida ee la xaqiijiyay ee saliida ceyriin ee caadiga ah, iyo tan toddobaad ee ugu weyn ee la xaqiijiyey ee gaaska dabiiciga ah. Inkasta oo kaliya sedaxda dal ee ugu weyn soosaarayaasha saliidda, haddana ay tahay shanaad shanaad ee dhoofinta saliidda, iyada oo keliya Ruushka iyo Saudi Arabia dhoofinta ugu badan ay si aad ah uga sii badan yihiin. Dhoofinta dhoofinta liidata ayaa si dhaw ula socota kuwa Iran, iyo Kuweyt, kuwaas oo dhammaantood leh kayd aad u weyn.
2009, iyada oo ay ugu wacan tahay u hoggaansanaanta tusaalaynta rikoodhka wax-ka-goosashada ee ay ballanqaadeen Ururka Wadamada Dhoofintii Batroolka (OPEC) ee xasilinta suuqyada saliidda, soosaarka Imaaraadka ee UAE wuxuu hoos ugu dhacay ku dhowaad 2.3 milyan oo fuusto maalintii (bpd) laga bilaabo 2.9 milyan ee 2008. Waxsoosaarka gaaska wuxuu ku taagnaa qiyaastii 7 bilyan oo heerka caadiga ah cubic feet maalin kasta. Imaraadka Carabtu waxay hore u riixaysaa qorsheyaal ay ku ballaarineyso awoodda wax soo saarka saliida iyo gaaska, laakiin waxay kordhisay waqtiga loo habeeyay horumarinta saliida iyadoo mudnaanta sare la siinayo mashaariicda gaaska.
Horraantii 2009 xiriirka kaydka gaaska ee Xiriirka wuxuu istaagay 227.1 tiriliyan mitir cubic feet - gaas ku filan in ka badan sanadihii 130 ee saadka ee heerarkii wax soo saarka ee ugu dambeeyay. Waxyaabaha kale ee jira, tani waxay ka dhigan tahay 'gaaska' Emirates 'yaraanta oo aan sabab u ahayn la'aanta kaydka gaaska, laakiin waa horumar aan ku filnayn, in kasta oo qaar badan oo ka mid ah gaasku ay yihiin nooc qaali ah oo ay adag tahay in la soo saaro. Abu Dhabi wuxuu muhiim u yahay kor u qaadista awoodda wax soo saarka guud ee saliida iyo gaaska ee UAE, maxaa yeelay waxay ka kooban tahay boqolkiiba 94 boqolkiiba kaydka saliida ee federaaliga iyo in kabadan boqolkiiba 90 keydkeeda gaaska. Waxay kordhineysaa awoodda wax soo saarka saliida iyo gaaska.
Dhanka kale, wax soo saarka saliida ee Dubai, oo mar la xisaabiyey ku dhawaad ​​kalabar saamiyeedkii Emirate-ka GDP, wuxuu si aad ah hoos ugu dhacay heerkiisii ​​ugu sarreeyay ee 1991 ee 410,000 bpd; 2007 waxay hoos ugu dhacday 80,000 bpd. Iyada oo ay wali sii wado inay gaaska ka keento meelaha ka baxsan xeebaha, Dubai ayaa waliba cunaysa shidaal ka badan inta ay soo saarto, waxayna si aad ah ugu tiirsan tahay soo dejinta si ay u kala duwanaato. Imaaraadku wuxuu horeyba uga iibsadaa gaas boqolaal milyan oo cubic feet ah gaas maalin kasta Dolphin Energy, oo ah shirkad Abu Dhabi ah oo shidaal ka soo dhoofisa Qatar.
Afar ka mid ah Imaaraatka shanta imaaraad ee haray ayaa iyaguna leh tiro yar oo wax soo saar saliid iyo gaas ah; Fujairah ma soo saarto saliid ama gaas, in kasta oo barnaamij sahaminta dhinaca xeebta ah hadda la marayo. Si kastaba ha noqotee, dekedaha labaad ee ugu weyn adduunka ayaa ku yaal xeebteeda. Dekadda Fujairah, ee ku taal Badda Carbeed, waxay gacanta ku haysaa qiyaastii 1 milyan oo tan bishii ah ee gaadiidleyda badda iyo alaabada kale ee saliidda. Imaatinka 2008 ee gaaska laga soo dhoofiyo dhuunta Tamarta ee Dolphin ee ka timaada Qatar ayaa fududeysey koboca biyaha iyo biyaha ee imaaraadku waxayna kicisay warshadaha maxalliga ah.
IPIC, oo ay leedahay Dowladda Abu Dhabi, waxay dhiseysaa dhuumo istiraatiiji ah oo saliid ceyriin si ay u gaarsiiso illaa xNUMX bpd oo saliid ah dhulalka xeebta ku yaal ee Abu Dhabi oayada Terminalka cusub ee dhoofinta ee Fujairah. Mashruuca ayaa ujeedadiisu tahay in la siiyo waddo dhoofineed oo loogu talagalay Abu Dhabi oo maraya marinka marinka khaliijka ee maraakiibta ee Hormuz. Waxaa loo qorsheeyay in lagu dhammeeyo 150,000, iyadoo markabka ugu horreeya ee shixnadaha laga soo qaado Fujairah la filayo horraantii 2010. IPIC waxay sidoo kale horumarineysaa xarun shidaal oo lagu keydiyo iyo keyd lagu keydiyo dekada Fujairah.
Iyada oo ku dhawaad ​​boqolkiiba 10 boqolkiiba wadarta guud ee sahayda kaydka saliida cayriin iyo tan kaydka gaaska 5aad ee ugu weyn dunida, Imaaraadku uu yahay shuraako lama huraan ah isla markaana mas'uul ka ah suuq geynta tamarta adduunka. In kasta oo udub dhexaadka u ah dhaqaalaha, dhoofinta saliida ayaa hadda ah kaliya qiyaastii 30 boqolkiiba wadarta guud ee wax soo saarka guud, taas oo ay sabab u tahay siyaasadaha dawliga ah ee dagaal ee loogu talagalay in lagu ballaariyo dhaqaalaha UAE.
Imaaraadku wuxuu kaloo wadaa dardar galinta barnaamijyada tamarta dib loo cusbooneysiin karo iyo waxtarka tamarta. 2005 Imaaraadku wuxuu ansixiyay Borotokoolka Kyoto ee Shirweynaha Qaramada Midoobay ee Isbedelka Cimilada, isagoo noqday mid ka mid ah waddammada ugu horreeya ee saliida soo saara. Abu Dhabi wuxuu kaloo aasaasay mid ka mid ah dadaallada tamarta adduunka ee la cusbooneysiin karo iyo beddelka tamarta.
Saliida iyo Gaaska Dabiiciga
Imaarad kastaa wuxuu xukumaa wax soo saarkiisa saliida iyo hormarinta Kheyraadka. Abu Dhabi wuxuu hayaa inka badan boqolkiiba 90 ee ilaha saliida ee UAE, ama qiyaastii xNUMX bilyan oo fuusto. Dubai waxaa ku jira qiyaastii bilyan koronto oo ah 92.2 bilyan, oo ay ku xigto Sharjah iyo Ras al-Khaimah oo leh bilyano 4 iyo 1.5 milyan oo foosto oo saliid ah, siday u kala horreeyaan.
Abu Dhabi wuxuu leeyahay taariikh soo dhaweyn u ah maalgashiga ganacsiga gaarka loo leeyahay sahaminta saliida iyo gaaska sahaminta iyo wax soo saarka. Runtii, Abu Dhabi wuxuu ahaa xubinta kaliya ee OPEC ee aan wadanin u hayn qabashada maalgashadayaasha shisheeyaha ah inta lagu gudajiro mowjad qarameedyada ee baabi'inaya warshadaha saliida iyo gaaska ee badhtamihii '1970's', waxayna sii wadaysaa inay ka faa iideysato heerar sare oo maalgashi waax ah. Maanta shirkadaha saliida caalamiga ah ee ka socda Mareykanka, Japan, France, Britain iyo dalal kale waxay sii wadaan inay qabtaan saamiyada isku-dhafka ah ee u dhexeeya boqolkiiba 40 iyo 100 boqolkiiba heshiisyada ballaaran ee Abu Dhabi.
UAE waxay u dhoofisaa boqolkiiba 60 boqolkiiba saliiddeeda cayriinka ah Japan, taasoo ka dhigaysa macaamiisha ugu weyn ee UAE. Dhoofinta gaaska ayaa gebi ahaanba gebi ahaanba u ah Japan, oo ah iibiyaha ugu weyn dunida ee gaaska liito, iyadoo Imaaraadku uu siinayo ku dhawaad ​​sideed meelood meel dhammaan shuruudaha Japan.
Sababta oo ah inta badan xaqiiqda juqraafiyeed ee saamaysa qiimaha gaadiidka, Imaaraadku waxay u dhoofiyaan Mareykanka tiro aad u yar oo shidaal iyo gaas ah. Si kastaba ha noqotee, Imaaraadka Carabtu wuxuu muhiim u yahay saliida iyo gaaska suuqyada caalamiga wuxuuna ku xigaa Sacuudiga oo keliya marka loo eego awoodda soosaarka saliida. Intaa waxaa sii dheer, qorshayaasha dagaal ee UAE ee lagu ballaarinayo awoodda wax soo saarka waxay gacan weyn ka geysan doontaa bilowga mustaqbalka, kordhinta baahida loo qabo ee qiimaha saliida ceyriinka.
Mashruuca Dolphin, oo dhoofinta gaaska dabiiciga ah dhuunta ka keena Qadar una wareego Imaaraadka, ayaa ahayd heshiiskii ugu horreeyay ee waaweyn ee xuduudaha xuduudaha ka dhexeeya waddamada Khaliijka. Mashruucu wuxuu xorayn doonaa gaaska Abu Dhabi soo kabashada saliida cayriin iyo dhoofinta. Shilalka Batroolka ee Mareykanka iyo Wadarta Faransiiska mid walbaa wuxuu leeyahay saamiga boqolkiiba boqol ee 24.5 saamiga mashruuca, halka Dowladda Abu Dhabi ay heysato boqolkiiba inta hartay ee 51. Alaabtii ugu horreysay ee ganacsi ee gaaska dabiiciga ee Qatari waxay bilaabatay xagaaga 2007 waxayna sii socon doontaa inta lagu jiro muddada 30-sano ee heshiiska horumarinta iyo wax-soosaarka la wadaagga ee ay la saxiixdeen Dowladda Qadar.
Sugida Maraakiibta Shidaalka
Dadaal lagu xoojinayo amniga sahayda, dowladaha khaliijka ayaa daraasad ka sameynaya horumarinta marinno saliid oo dhaafi doona dariiqa Hormuz. Qiyaastii laba-meelood laba meelood saliida baayacmushtarka ku iibiya adduunka ayaa hadda lagu soo daadgureeyaa booyadaha iyada oo loo sii marayo marinkan 34-mile-ballaaran.
Haddii la dhiso, dhuumaha ayaa u dhaqaaqi kara ilaa iyo xNUMX milyan oo fuusto oo saliid ah maalintii ama qiyaastii boqolkiiba 6.5 qaddarka hadda la soo direy iyadoo loo sii wado Waddada. Dhismaha tubo hore, yar yar ayaa saliid ka qaadi doonta garoonka saliida ee Habshan ee UAE una socota Emirate of Fujairah, oo ku taal bannaanka dariiqa gacanka Cadmeed.
Ballaarinta Sahayda Saliidda
UAE waxay sii wadaa inay si weyn u kordhiso wax soo saarkooda si ay u siiso suuqyada tamarta adduunka. In kasta oo qaar ka mid ah waddamada OPEC iyo dalal badan oo aan ahayn OPEC ay arkeen hoos u dhac wax soo saar shantii sano ee la soo dhaafay, Imaaraadku wuxuu kordhiyay wax soo saarkii guud ee saliida ceyriinka ah qiyaastii boqolkiiba 31. Sanadna ma jirin mudadaas dhexdeeda wax soosaarka celcelis sanadeedku wuxuu ka hooseeyay sanadkii hore.
Ujeedka mustaqbalka, qeybaha sare ee saliida iyo gaaska ee UAE waxay sii wadaan inay aqoonsadaan mashruucyo cusub oo loogu talagalay in lagu kobciyo awoodda wax soo saarka saliida ceyriinka ah ee ku dhowaad 4 milyan oo fuusto maalin kasta 2020, taasoo noqon doonta koror dheeraad ah oo qiyaastii boqolkiiba 40 ah kan hadda jira heerarka wax soo saarka.
Korantada: Si dhakhso ah Baahiyaha Baahiyaha
Koboca dhaqaalaha ee guud ahaan UAE wuxuu horseeday koror ballaaran oo ah baahida loo qabo koronto. Qiyaasaha hadda jira waxay soo jeedinayaan in baahida qoyska ee awooda ay labo jibaari doonto 2020. Iyada oo xadidan sida iyo sida dhakhsaha leh ee ilaha dhaqameed ee tamarta, sida gaaska dabiiciga ah, loo keeni karo suuqa, iyo sidoo kale walaacyada ku saabsan isbeddelka cimilada, Dowladda Imaaraatka Carabtu waxay bilawday dadaalo kala duwan oo lagu garto qaabab kale oo lagu soo saari karo awooda looga baahan yahay shidaalka. dhaqaalaha.
Imaraadka Carabtu waxay qiimeynayaan suurtagalnimada sameynta barnaamij tamarta nukliyeerka ee nabdoon. Dowlada Imaaraatka carabtu waxay si aad ah uga warqabaan xasaasiyadaha ku lug leh keenista kaydka nukliyeerka iyo xitaa qiimeynta sahlan ee suuragalka ah. Sidaas darteed, Dowladda UAE waxay ka shaqeysay sidii ay u caddeyn lahayd himilooyinkeeda nabadeed iyo kuwa aan caqliga lahayn, marka la eego qiimeynta ay hadda ku leedahay barnaamijka tamarta nukliyeerka ee nabdoon iyo sidoo kale mustaqbalka suurtagalka ah ee loo diro. Dawladdu waxay u sii daayay warqad qoto dheer siyaasaddeed dadweynaha, oo ka hadlaysay sida suurtagalka ah ee horumarinta tamarta nukliyeerka loola raaci doono si nabadgelyo ah, xasilloon oo nabad ah. Iyada oo qayb ka ah ballan-qaadyadeeda daah-furnaanta, fidinta, nabadgelyada iyo nabadgelyada, Imaaraadku wuxuu goostay inuusan sii wadi doonin kobcinta yuuraaniyamka taas bedelkeedna uu ku tiirsanaan doono suuqa caalamiga ah ee shidaalka nukliyeerka. Inta hawshu socoto, UAE waxay wadashaqayn dhow la yeelatay Wakaaladda Caalamiga ee Tamarta Atomiga (IAEA) iyo dawladaha kale, oo ay ka mid tahay Maraykanka.
In kasta oo doorka muhiimka ah ee saliida iyo gaaska ay ka leeyihiin UAE, waddanku wuxuu sameeyey ballanqaadyo hoose oo ku saabsan tamarta kale. Imaaraadku wuxuu qaadayaa tillaabooyin lagu dhimayo qiiqa kaarboonka iyada oo loo sii marayo dadaallada ugu waaweyn ee Abu Dhabi iyo Dubai.
Dubai waxay diyaarineysaa qorshe deegaanka u wanaagsan oo xaqiijin doona in koritaanka iyo horumarka la gaaro iyada oo la ilaalinayo bay'ada. Maareynta dhinaca-korantada ee korantada ayaa door ka ciyaari doonta, sidoo kale waxay kordhin doontaa gaadiidka dadweynaha.
Imaaraatka ugu weyn ee Imaaraatka, Abu Dhabi, wuxuu ku kacay inka badan $ 15 bilyan oo barnaamijyada tamarta dib loo cusbooneysiin karo. Mashruuca Masdar wuxuu hoosta ka xariiqayaa mataanada mataanaha ah ee deegaanka adduunka iyo kala duwanaanshaha dhaqaalaha UAE. Barnaamijka Masdar Initiative wuxuu diiradda saarayaa horumarinta iyo ka ganacsashada tikniyoolajiyadda tamarta la cusboonaysiin karo, waxtarka tamarta, maareynta kaarboonka iyo daweynta, isticmaalka biyaha iyo quusitaanka.
Wada-hawlgalayaasha 'Initiative' waxaa ka mid ah qaar ka mid ah shirkadaha tamarta adduunka ugu waaweyn iyo machadyada sare: BP, Shell, Occidental Petroleum, Total Sahaminta iyo Soo-saarka, General Electric, Mitsubishi, Mitsui, Rolls Royce, Imperial College London, MIT iyo WWF. Waxay leedahay afar waxyaabood oo muhiim ah: Xarun cusub oo wax soo saar leh oo lagu taageerayo bannaanbaxyada, ganacsiga iyo qaadashada tiknolojiyadda tamarta waarta. Macdar Masdar Machadka Sayniska iyo Teknolojiyadda oo leh barnaamijyo qalin jabiya tamarta la cusboonaysiin karo iyo waaritaanka, oo ku taal Masdar City, oo ah meesha ugu horreysa ee kaarboon-dhexdhexaadka ah, bilaashka ah, magaalada aan baabuurta lahayn. Shirkad horumarineed ayaa diiradda saartay suuq-geynta dhimista qiiqa hawada, iyo xalalka Horumarinta Nadaafadda sida ay ku siisay Borotokoolka Kyoto. Aag Dhaqaale Gaara ah oo lagu marti galiyo hay'adaha maal gashada tiknolojiyadda tamarta la cusboonaysiin karo iyo wax soo saarka
Siyaasadda Tamarta ee UAE
Imaaraadku muddo dheer wuxuu ahaa iibka tamarta ee muhiimka ah wuxuu hadda noqday macaamiil ku habboon tamarta sidoo kale. Dadaalladeeda ku aaddan sidii loo dardargelin lahaa horumarinta kayd biyood dheeri ah oo dheeri ah iyo dadaalkeeda ah inay gacan ka geysato horumarinta iyo hirgelinta ilaha tamarta ee kale, Imaaraadku waxay rajeyneysaa inay sii wadato dhaqankeeda dheer ee mas'uulka tamarta.
Ilaalinta iyo ilaalinta jawiga UAE waa mid ka mid ah howlaha ugu adag ee ay soo wajahday ilaa maanta. Heerkul sare iyo roob yar ayaa abuura xaalado adag, oo u baahan is-waafajin gaar ah oo loogu talagalay xayawaanka iyo dhirku inay noolaadaan. Xitaa isbeddelada cimilada yar waxay saameyn xun ku yeelan karaan noolaha UAE noolaha. Intaas waxaa sii dheer, xeebta hoose ee beenta hooseysa micnaheedu waa xitaa in yar oo kor u kaca heerka badda ah ay saameyn weyn ku yeelan karto aagga xeebta, halkaas oo inta badan dadka ku nool dalka ay ku noolyihiin halka horumarka badan ee la qorsheeyay uu ka dhacayo. Runtii, daraasaadka sayniska ayaa lagu ogaanayaa astaamaha muujinaya in heerka badda ee Gacanka laga yaabo inuu mar hore sii kordhayo.
Dadku wuxuu ka koray qiyaastii 180,000 gudaha 1968 ilaa ku dhawaad ​​shan milyan maanta. Natiijo ahaan, qadarka dhulka loo istcimaalo deganaanshaha, ganacsiga iyo isticmaalka warshadaha ayaa si aad ah u kordhay. Xaraashka iyo horumarka ayaa dib u qaabeeyey Imaaraadka Xeebta xeebta waqti aad u gaaban. Kordhinta kaabayaasha xiriirka qaab dhismeedka garoomada diyaaradaha, dekedaha iyo wadooyinka waa weyn ayaa ku dhintay lacagihii hore ee deegaanka dabiiciga ahaa, halka dhagaxa burburka dhismaha uu saameyn weyn ku yeeshay inta badan buuraha Hajar.
In kasta oo ay jiraan isbeddelada isbeddelka ah, Dowladda waxaa ka go'an in ay dhowrista deegaanka iyo in ay gaaraan isku-dheellitirnaan waara oo ka dhaxaysa ilaalinta deegaanka iyo baahiyaha horumarinta.
Wasaaradda Deegaanka iyo Biyaha, oo ay weheliso hay'adaha maxalliga ah - oo ugu firfircoon waa Hay'adda Deegaanka Abu Dhabi, oo mas'uul ka ah ku dhawaad ​​afar-meelood meel meel u dhow dhulka UAE - waxay sii wadeen inay ka shaqeeyaan barnaamijyada firfircoon ee cilmi baarista sayniska iyo diyaarinta iyo hirgelinta xeerarka iyo tilmaamaha weligood jira.
Ololeyaasha waxbarashadda waxaa loo habeeyay iyada oo gacan laga helayo ururada aan dawliga ahayn sida Emirates Wildlife Society (EWS) si kor loogu qaado wacyiga dadweynaha ee baahida loo qabo in la ilaaliyo deegaanka lana yareeyo isticmaalka tamarta iyo biyaha.
Deegaanka la ilaaliyo ee Yasat Marine, oo leh qulqulka qatarta leh ee qotodheer, ayaa la balaariyey inay kujirto dhowr jasiiradood oo dheeri ah, waxayna hada dabooshaa aag qiyaastii kilomitir laba jibaaran ah oo ah 3000. EWS iyo degmada Fujairah waxay sidoo kale cadeeyeen Wadi Wurrayah inuu yahay keyd la ilaaliyo. Hoy u ah tahrida carabta ee halista gashay, tani waa xayndaabka buurta ugu horeysa ee UAE.
Ilaalinta biyo nadiif ah iyo kheyraadka badda ayaa sidoo kale ku sarreeya ajandaha Imaaraatka, halka wasakhaynta hawada ee loo aaneynayo dhagxaanta iyo soo saarista sibidhka ay horseedday in la xiro qaar ka mid ah dhismaha Ra-al-Khaimah iyo Fujairah.
Intaas waxaa sii dheer, Xiriirku sanado badan ayuu la shaqeeyay wadamo kale asaga oo ku saleynaya heshiisyo laba geesood ah oo lagu ilaalinayo xayawaanno gaar ah, sida houbara bustard, kaas oo ku abtirsada bartamaha Aasiya laakiin u haajiraa gacanka Carbeed. Imaraadka carabta ayaa hada loo doortey inay noqoto xarunta dhexe ee heshiis cusub oo caalami ah oo ku saabsan dhowrista iyo ilaalinta noocyada guurguuratada ee ugaarsada Europe, Afrika iyo Aasiya.
Warbaahinta iyo Dhaqanka
Imaaraadku waa wadnaha ganacsiga ee qaybta warbaahinta bariga dhexe, wuxuu u shaqeeyaa xarun xarun u ah shirkadaha warbaahinta caalamiga ah iyo waliba goob bacrin ah oo lagu horumariyo warshadaha warbaahinta gudaha. Qeybta dhaqsaha u koraya ayaa waxaa kormeera Golaha Qaranka ee Warbaahinta, oo mas'uul ka ah soo saarista shatiyada warbaahinta, meelmarinta shuruucda warbaahinta, iyo socodsiinta waaxda macluumaadka dibadda iyo Wakaaladda Wararka ee Emirates, WAM.
Mid ka mid ah warbaahinta ugu waaweyn ee dalka ayaa ah shirkadda warbaahinta ee Abu Dhabi, oo leh isla markaana leh hawlo telefishanno kala duwan, xarumo idaacado idaacado ah, daabacado dhowr ah (Wargeyska Al Ittihad, Wargeyska Qaranka, joornaalka Zahrat Al Khaleej iyo joornaalka Majid) ) iyo ganacsiyo kale oo dhowr ah oo la xiriira warbaahinta, oo ay ku jiraan shirkadda horumarinta filimka ee Imagenation, United Printing Press iyo Live.
Aagagga xorta ah waxay kaalin weyn ka qaateen horumarka warbaahinta, CNN waxay asaastay xarun warbaahineed oo ku taal Abu Dhabi cusub ee 'labafour54 zone' kaasoo soo jiidatay xirfadlayaal kale oo badan oo warbaahinta ah. Dubai Media City hadda waxay leedahay in ka badan 1200 ganacsi diiwaan gashan sida CNN, BBC, MBC iyo CNBC. Kani waa mid ka mid ah qaybo badan oo ka mid ah aagagga xorta ah ee warbaahinta oo ay maamusho Tecom, oo ay ku jiraan Dubai Internet City, Dubai Studio City iyo Aaladda Soo Saarka Warbaahinta Caalamiga ah. Aagaggan waxaa buuxiyay horumarinta aagagga yar yar ee warbaahinta xorta ah sida Fujairah Creative City iyo RAK Media City.
Soo-saarista filimka, heer caalami iyo ta gudaha labadaba, waa la dhiirrigeliyaa, waxaana taageeraya dhowr hay'adood, oo ay ku jiraan Dubai Studio City, twofour54, Maamulka Abu Dhabi ee Dhaqanka iyo Hiddaha (ADACH), Circle iyo Abu Dhabi Film Gudiga.
Buugaag, ay ka mid yihiin tarjumaadaha shaqooyinka waaweyn ee afka carabiga, waxaana soosaaray ururada sida Kitab iyo Kalima. Bandhigyo waaweyn oo loogu talo galay daabacayaasha buugaagta ee lagu qabtay UAE ayaa waxaa ka mid ah Bandhigga Caalamiga ah ee Sharjah International Book Fair iyo Bandhigga Buugaagta Caalamiga ah ee Abu Dhabi, halka abaalmarinta ugu weyn ee suugaanta ay tahay Abaalmarinta Buugga Sheekh Zayed, oo u gudubtay Pedro Martinez Montavez ee 2009.
Naadiga 'Press Press Club' waxay abaabushaa waxyaabo ay ka mid yihiin, Arab Media Forum, waxayna martigelisaa Abaalmarinta Saxaafadda Arabsiyo, hadda waa sanadkii siddeedaad oo ay ka kooban tahay laba iyo toban qaybood oo kala duwan.
Dhaxalka iyo dhaqanku waxay udub dhexaad u yihiin aqoonsiga qaran, UAE waxay sameyneysaa dadaalo badan oo lagu ilaalinayo dhaqankeeda soo jireenka ah. Isla mar ahaantaana, Xiriirka wuxuu marayaa dhaqan-celin dhaqan, iyada oo si gaar ah xoogga loo saaray maalgashiga kheyraadka adduunka iyo sameynta buundooyinka u dhexeeya Bariga iyo Galbeedka.
Wasaaradda Dhaqanka, Dhallinta iyo Horumarinta Bulshada waxay ku firfircoontahay arimahan, abuuraya fursado loogu talagalay dhalinyarada dhalinyarada ah inay kaqeyb qaataan nashaadaadka dhaqanka, caqliga, isboortiga iyo nashaadaadka madadaalada, iyadoo sidoo kale lagu dhiirigelinayo muwaadiniinta waayeelka ah inay kaqeybqaataan latalintooda, qeybinayan aqoontooda dhaqanka da 'yarta.
Si looga caawiyo kobcinta qadarinta muusikada, ADACH waxay abaabushaa munaasabado badan oo muusig ah, oo ay ku jiraan Abu Dhabi Classics, oo martigeliyay bandhiga Bariga Dhexe ee New York Philharmonic ee 2009. Bandhiga heesaha adduunka ee WOMAD ayaa sidoo kale lagu qabtay Abu Dhabi. Intaa waxaa sii dheer, riwaayado taxane ah oo cinwaankiisu ahaa 'Dubia Sound City' ayaa saameyn weyn ku yeeshay 2009. Marka la eego farshaxanka muuqaalka ah, horaantii 2009 bandhigga 'Emirati Expression' waxaa lagu soo qaatay siddeetan iyo todobaatan farshaxan oo maxalli ah, laga soo bilaabo sawirada halyeeyada ilaa jiil cusub oo sawir qaadayaal, nashqadeeyayaal garaafyo ah, fiidiyoow iyo farshaxan rakibayaal. Dhanka kale, Sharjah Biennial, Art Dubai, Art Fair iyo tiro kale oo bandhigyo ah ayaa la qabtay iyada oo lala kaashanayo wada-hawlgalayaasha sida Guggenheim Foundation, Louvre, New York University Abu Dhabi, iyo Paris-Sorbone University Abu Dhabi. Farshaxanka casriga ah ayaa sidoo kale si wanaagsan loogu metelay meheradaha heeganka leh ee ku yaal Emirates oo dhan.
Mid ka mid ah dadaallada dhaqameedyada caalamiga ah ee Wasaaradda Dhaqanka, Dhallinta iyo Horumarinta Bulshada muddadii sanadka ah waxaa ka mid ahaa abaabulkii ugu horreeyay ee Imaaraadku ka fuliyo Venice Biennale. Hawlaha kale ee dibedda waxaa ka mid ah dabaaldeg todobaad ah 'Bandhig Maalmaha Dhaqanka ee UAE ee Berlin iyo bandhig farshaxan oo Emirati-Jarmal ah oo ka socda Huamburg, halkaas oo mashruuc kale oo Wasaaradda ah,' Wadahadalka Dhaqammada '.
Dhanka dhaqanka ballaaran, matxafyada heer-caalami ah sida Guggenheim Abu Dhabi, Louvre Abu Dhabi, iyo Madxafka Qaranka ee Sheikh Zayed ayaa socda. Dhanka kale, Qeybta Matxafka Sharjah ee horay loo habeeyey ayaa maamusha 17-madxaf iyo xarumo dhaqan, oo ay kujirto madxaf cusub oo ilbaxnimo islaami ah.
Dadka iyo Bulshada
Rabitaan kor loogu qaadayo heerka nool dadkeeda iyo wanaagga guud ee bulshada ayaa horseeday siyaasad badan oo dawladeed - kaliya maahan xaga horumarka dhaqaalaha, laakiin sidoo kale arimaha bulshada. Dhowr sano oo gaagaaban, isbeddello baaxad leh oo bulsheed ayaa ka dhacay bulsho had iyo jeer ahaan jirtay qabyaalad; waa guul la taaban karo, in kasta oo ay murugadaani taagan tahay, in Imaaraadku uu yahay degganaan amni ah, furfuran oo bulshada horumaray, oo caan ku ah dulqaadkeeda, bini-aadamnimada iyo naxariis.
Dadaallada dowladda ee lagu caawinayo bulshada nidaamka isbedelka ayaa lagu xoojiyay siyaasad, lagu aasaasay 2009, in wacdiyada salaadaha jimcaha dhammaan masaajidada Xiriirka ay tahay inay xoogga saaraan kaalinta bulshada iyo waxbarashada diinta ee ma ahan oo keliya damiirka diinta. Mawduucyada waxaa ka mid ah sida loo barbaariyo carruurta, xuquuqda haweenka iyo muhiimadda ay u leedahay shaqada, lve dalka iyo dulqaad.
Siyaasadda bulshada ee dawladdu waxay ahayd mid wax ku ool ah, sida ka muuqata darajaynta darajada 'UN Human Development Index' (HDI), oo u muuqata mid dhaafsiisan GDP qeexitaan ballaadhan oo ladnaanta. Inta u dhaxaysa 1980 iyo 2007, UAE HDI waxay kor u kacday boqolkiiba 0.72 sannad kasta, maantana waa 0.903, oo ka soo baxday 0.743. Tani waxay ka dhigeysaa Xiriirka Soddon-shanaad shanaad ee 182 dalal kaas oo xogta laga heli karo - sugida booska UAE ee liiska waddamada leh dhibcaha horumarka aadanaha oo aad u sarreeya.
Si kastaba ha noqotee, kororka tirada dadweynaha ee degdegga ah ee federaaliga ah wuxuu keenay caqabado xagga tirakoobka ah. Dhamaadka 2009, dadweynaha UAE waxaa lagu qiyaasey inay ahaayeen 50.6 milyan, oo ka korodhay 4.76 milyan oo kuyaal 2008, ama heerka kobaca sanadlaha ah ee qiyaastii boqolkiiba 6.3; heerka kobaca ee dadka maxalliga ah waxaa lagu qiyaasey boqolkiiba 3.4 boqolkiiba 2009. Si kastaba ha noqotee, inkasta oo kororkan degdegga ah, Imaaraadku sii watay booskiisa mid ka mid ah waddamada ugu taajirsan marka loo eego dakhliga GDP halkii dakhli, taas oo lagu qiyaasay Dh195,000 (US $ 53,133.5) bilowgii 2009; labaad oo keliya Qatar ee dunida Carabta.
Qoysku waligood waxay aasaas u ahaayeen bulshada UAE. Maanta arrimaha dhaqan-dhaqaale waxay caqabado ku noqon karaan xitaa kuwa ay ka go'antahay xubnaha qoyska, Dawladduna waxay siisaa taageero dadka baahan, gaar ahaan waayeelka, naafada iyo furriinka. Intaa waxaa sii dheer, tiro badan oo ururo samafal oo dowladeed iyo kuwa aan dowli ahayn oo samafal ah ayaa ku lug leh barnaamijyada daryeelka bulshada. Hay'adda Bisha Cas ee UAE, gaar ahaan, waa hay'ad samafal oo ugu weyn dalka, oo maamusha barnaamijyo bulsho oo dhameystiran, dhaqaale, caafimaad iyo waxbarasho. Caawimaad wax ku ool ah waxaa sidoo kale bixiya xarumaha bulshada oo ay maamusho Ururka Haweenka Guud.
Dawladdu waxay sidoo kale mudnaanta siineysaa baahiyaha guryaha ee maxalliga ah waxayna ka go'an tahay dhisidda bulshooyinka leh tas-hiilaadka baahiyaha. Ku dhawaad ​​17,000 villas cusub oo Emiratis ah ayaa laga dhisi doonaa Abu Dhabi shanta sano ee soo socota, iyo 50,000 labaatanka sano ee soo socda. Inta badan guryaha iyo shirqoollada waxaa la siinayaa muwaadiniinta si bilaash ah. Barnaamijka Guryaha ee Sheekh Zayed, oo ay maalgaliso Dowladda si loogu bixiyo deeqo guryo iyo deyn loogu talagalay muwaadiniinta UAE, ayaa sidoo kale sii wadaysa fidinta howlaheeda ay ka wado guud ahaan Imaaraatka.
Imaaraadku wuxuu ixtiraamayaa jiritaanka shaqsi kasta oo ku nool Xiriirka. Waxaa ka go'an inay dammaanad qaado sinnaanta iyo caddaaladda bulshada ee dhammaan muwaaddiniintu waxay ku qoran tahay Dastuurka. Dastuurku wuxuu kaloo qeexayaa xorriyadda iyo xuquuqda dhammaan muwaadiniinta, isagoo mamnuucaya jirdil, xarig aan sabab lahayn iyo xiritaan, iyo ixtiraamka xorriyadda madaniga ah, oo ay ku jiraan xorriyadda hadalka iyo saxaafadda, xasiloonida.
isu imaatin uruurin iyo is bahaysi, iyo dhaqan ku dhaqanka rumaynta diinta. Dowladda waxaa ka go'an inay sare u qaaddo, hab wax ku ool ah, mabaadii'da Bayaanka Baaqa Caalamiga ee Xuquuqda Aadanaha waxaana ka go'an inay hagaajiso diiwaankeeda gudaha iyada oo la imaanaysa qawaaniinteeda iyo dhaqangelinteeda taariikhda. Tani waxay la jaan qaadeysaa hidaha dhaqanka ee UAE iyo qiyamka diimeed, oo xusaya cadaaladda, si siman iyo dulqaad leh.
Heerka caalamiga ah, Xiriirku wuxuu saxeexay Heshiiska Ciribtirka Takoorka ka dhanka ah Haweenka, Heshiiska Xuquuqaha Caruurta, Heshiiska Ururka Shaqaalaha Caalamiga ee Da'da Yar, iyo Heshiiska Xuquuqda Naafada.
Heer qaran, Xiriirku wuxuu saxeexay Heshiiska Ciribtirka Takoorka ka dhanka ah Haweenka, Heshiiska Xuquuqaha Caruurta, Heshiiska Ururka Shaqaalaha Caalamiga ee Da'da Yar, iyo Heshiiska Xuquuqda Naafada.
Heer qaran, istiraatiijiyad dowladeed waxay diiradda saareysaa sidii loo xaqiijin lahaa horumarka dalka oo waara iyo dadaallada kor loogu qaadayo xoojinta haweenka iyo horumarinta tayada waxbarashada iyo nidaamyada daryeelka caafimaadka, iyo sidoo kale la-habeynta xubnaha bulshada leh baahiyaha gaarka ah iyo kooxaha kale ee nugul. geedi socodka horumarka.
Arinta ku saabsan arrimaha shaqaalaha, UAE waxay higsaneysaa inay maamusho oo ay maamusho jawiga shaqada iyada oo la raacayo qawaaniinta caalamiga ah iyo dhaqanka ugu wanaagsan ee caalamiga ah ee ku saabsan shaqada shaqaalaha. Waxaa la sameeyay dadaallo badan oo lagu hubinayo badbaadada shaqaalaha, si loo dammaanad qaado bixinta mushaarka waqtigii loogu talagalay iyo in la wanaajiyo xaaladaha nolosha iyo shaqada, iyo sidoo kale in la hubiyo in si adag loo adkeeyo sharciga si loo yareeyo xad-gudubyada.
Sinnaanta ragga iyo dumarku waxay ku jirtay ajandaha Dawladda ilaa aasaaska Xiriirka, iyo dumarka ku nool UAE muddo fog ayaa loo aqoonsaday inay lammaaneyaal siman yihiin horumarka qaranka. Dawladdu waxay sii wadaysaa inay sii waddo istiraatiijiyad lagu xoojinayo haweenka dhinacyada dhaqanka, bulshada iyo dhaqaalaha. Sidaas darteed, UAE waxay ku jirtaa booska Soddon iyo sideedaad ee 2009 UN Development Report Warbixinta Horumarinta laxiriirta Jinsiga - Jaantus ayaa dhigaya mid ka mid ah wadamada ugu sareeya.
Haweenka UAE ayaa maanta ka qaybgalaya dhammaan xarumaha dawladda, oo ay ku jiraan fulinta, sharci dejinta iyo laamaha garsoorka, waxayna ku raaxaystaan ​​shaqooyin kaladuwan. Xaqiiqdii, haweenka UAE waxay hadda ka yihiin boqolkiiba 66 boqolkiiba shaqaalaha bulshada, boqolkiiba 30 oo iyagu ku jira jagooyin sarsare.
Dhamaan muwaadiniinta UAE waxay ku raaxeystaan ​​helitaanka guud ee bilaashka ah ee waxbarashada aasaasiga, dugsiga sare iyo waxbarashada sare. Sanadihii la soo dhaafay, waaxda waxbarashada waxay qaadatay muhiimad cusub: dib-u-habeynteeda iyo horumarinteeda waxay ka dhigan tahay tallaabo muhiim ah himilooyinka horumarinta xiriirka ee hadda jira, iyo dadaallo waaweyn ayaa laga sameynayaa guud ahaan guddiga si dib loogu eego manhajka loona hubiyo in dugsiyada iyo kulliyadaha si sax ah loo qiimeeyo. waana la isla gartay.
Waxbarashada Gaarka ah ayaa heleysa feejignaan cusbooneysiin ah, iyadoo diiradda lagu saarayo isugeynta 2009 ee ku saabsan isdhaxgalka ardayda qaranka ee xarumaha kala duwan ee baahiyaha gaarka ah ee loo yaqaan iskuulada guud ee caadiga ah. Heerar cusub oo heerar loogu tala galay iskuulada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayaa hadafkiisu yahay in lagu hubiyo in iskuullada ay u hoggaansamaan siyaasadan, ciqaabtuna waxay noqon doontaa mid aan aqbalin carruurta leh baahiyaha gaarka ah.
Tacliinta heerka-jaamacadeed ee UAE sidoo kale waxay ku socotaa koritaanka degdega iyo isbedelka. Xarun cusub oo jaamacadeed oo loo yaqaan 'Zayed University' ayaa laga dhisayaa hektar 75 oo ku taal Degmooyinka soo ifbaxaya ee soo ifbaxaya. Jaamacadda UAE ee Al Cayn ayaa sidoo kale leh qorshayaal ballaarin ballaadhan, xarun cusub oo dhisme ahna waa la dhisayaa. Xarumaha kale ee muhiimka ah ee heerka saddexaad waxaa ka mid ah Kulliyadaha Sare ee Tiknolojiyadda, xarunta tababarka Etihad, Kuliyadda Duulista ee Duulista iyo Duulista Tacliinta sare, Machadka Imaaraatka ee Bangiga iyo Maaliyadda, iyo kulliyadaha Etisalat iyo jaamacadda.
Jaamacadaha ajnabiga ah, laga soo bilaabo Paris Sorbonne ilaa Jaamacadda Michigan State, ayaa si aad ah loogu metelay Imaraadka Carabta. Xerada Abu Dhabi ee Jaamacadda New York waxay furan tahay deyrta ee 2010. Hay'adaha kale ee muhiimka ah ee bixiya koorsooyin khaas ah oo kala duwan ayaa waxaa ka mid ah INSEAD, Akadeemiyada Filimka New York, Dugsiga Dowladda ee Dubai, Machadka Batroolka, iyo Machadka Sayniska iyo Teknolojiyadda Masdar.
Bixinta daryeelka caafimaad ee UAE waa mid caalami ah, iyo daryeelka ka hor iyo ka dib dhalmada waxay la jaan qaadayaan waddamada adduunka ugu horumarsan. Natiijo ahaan, rajada nololeed ee dhalashada sanadaha 78.5 waxay gaartay heerar la mid ah kuwii Yurub iyo Waqooyiga Ameerika.
Soo bandhigista ceymiska caafimaadka ee qasabka ah ee ku yaal Abu Dhabi ee qurbaha iyo ku tiirsaneyaashu waa darawal weyn xagga dibuhabaynta siyaasadaha daryeelka caafimaadka. Intaa waxaa dheer, dadaal federaal ah ayaa ujeedadiisu tahay inuu hubiyo in qof kasta oo Emirati ah iyo qurbo-joog dalka ah ay ku jiraan caymiska caafimaadka khasabka ah iyada oo la raacayo qorshe mideysan oo mideysan.
Xarumaha daryeelka caafimaadku horeyba heer sare ayey ku leeyihiin Imaaraatka, iyo, in kasta oo jawiga maaliyadeed, daryeelka caafimaadku uu weli diiradda saarayo maalgashiga, iyadoo dhowr mashruuc oo dowladeed iyo kuwa gaar loo leeyahay laga fulinayo 2009.
Daawada ka hortagga ah iyo caafimaadka dadweynaha waxaa loo tixgeliyaa inay muhiim u yihiin wanaagsanaanta muddada dheer ee dadka UAE tirada yar ee dhalinyarada ah. Khubaradu waxay kordhaan cuduro badan oo qaab nololeedka ah sanadaha soo socda. In kasta oo caqabadaha dhaqameed si tartiib tartiib ah loo baabiiyo, waxay wali saameeyaan arrimo culus sida kansarka. Mammografiyo khasab ah oo loogu talagalay haweenka da'doodu u dhaxayso afartan iyo lixdan jirka iyo mamnuucista sigaar cabista federaalka ee goobaha dadweynaha ayaa ah tusaalooyinka dadaallada la sameeyay si kor loogu qaado caafimaadka guud ee arrintan la xiriira. Imaaraadku wuxuu kaloo leeyahay heerar aad u tiro badan oo ah sonkorowga iyo cudurrada wadnaha iyo xididdada, iyo waxay soo saarayaan xeelado lagula tacaali karo arrimahan. Daryeelka caafimaadka aasaasiga ah waa aalad kale oo muhiim u ah siyaasada caafimaadka bulshada, iyo waxkastoo UAE ay si aad ah uga shaqeyneyso sidii loo horumarin lahaa.
Mas'uuliyiinta caafimaadka dadweynaha ee 2009 waxaa caqabad ku ahaa halista hargabka doofaarka (H1N1) faafidda. Si kastaba ha noqotee, saddexda qaybood ee waaweyn ee caafimaadka - Wasaaradda Caafimaadka, Maamulka Caafimaadka - Abu Dhabi iyo Maamulka Caafimaadka ee Dubai - ayaa si dhakhso leh oo wax ku ool ah ugu beddelay daawo ka hortagga, maaraynta dhibaatooyinka iyo xakameynta cudurka waxaana la dejiyay qorshe wax ku ool ah oo lagu maareeyo xaaladda. .
Imaaraadku wuxuu leeyahay adeeg caafimaad oo dhameystiran, oo ay dowladdu maal galiso iyo dhaqso u kobcinta waaxyada caafimaadka gaarka loo leeyahay oo gaarsiiya heerar sare oo daryeel caafimaad shacabka ah. Meelo badan oo ka mid ah Imaaraadka Carabta, gaarsiinta daryeelka caafimaadka ayaa waxaa ka socda isbadal la taaban karo.
Inta badan cudurada faafa sida duumada, jadeecada iyo cudurka dabeysha oo horey u ahaan jirey UAE ayaa la ciribtiray, halka daryeelka ka horeysa dhalaanka iyo ka dib dhalmada waxay la mid yihiin wadamada ugu horumarsan dunida: heerka dhalashada (cusub) heerka dhimashada. waxaa loo yareeyay 5.54 halkii 1000 iyo dhimashada ilmaha ilaa 7.7 halkii 1000. Heerarka dhimashada hooyada waxay hoos ugu dhacday 0.01 midkastoo 100,000 ah.
Natiijada ka dhalatay heerka daryeelka sare ee dhammaan heerarka nidaamka daryeelka caafimaadka, rajada nolosha dhalashada ee UAE, sannadihii 78.3 sano, waxay gaartay heerar la mid ah kuwa Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Ilaa iyo hada, daryeelka caafimaadka ee UAE waxaa si weyn u maal gelisay Dowladda. Sida qaybaha kale, xooga ayaa ah mid soo kordhaysa iyo iskaashiga dawlada iyo ganacsiyaduba ay noqdeen kuwa aad muhiim u ah.
Siyaasadda dadweynaha waxay diiradda saareysaa horumarinta qaab-dhismeedka abaabul iyo sharci ee ku saleysan ku-dhaqanka ugu wanaagsan, si kor loogu qaado awoodaha adeegga caafimaadka ee gaarka loo leeyahay iyo tan dowladeed. Intaas waxaa sii dheer, ficilka siyaasadaha dadweynaha wuxuu dejinayaa ahmiyadaha hormarinta adeegyada caafimaadka ee qeybta.
Isbedelka Daryeelka Caafimaadka ee Abu Dhabi
Bixinta daryeelka caafimaad ee Abu Dhabi waxay maraysaa marxalad kala guur ah oo saameyn doonta dhammaan qaybaha daneeyayaasha: bukaannada (muwaadiniinta iyo qurbaha), bixiyeyaasha iyo kuwa ka mas'uulka ah qorshaynta, hubinta tayada adeegyada iyo maalgelinta nidaamka caafimaadka. Ujeeddooyinka muhiimka ah ee Maamulka Caafimaadka ee Abu Dhabi waa:
Hagaajinta tayada daryeelka, had iyo jeer tixgelinta koowaad, in lagu dardar geliyo iyada oo la adeegsanayo heerarka adeeg adag iyo yoolalka waxqabadka ee dadka oo dhan.
La ballaariyo helitaanka adeegyada, siinta dhammaan deggeneyaasha inay helaan isla heer daryeel oo leh awood ay ku doortaan adeegyo daryeel caafimaad sidaas darteed kor u qaadidda heer sare ah iyada oo loo marayo tartan suuqa xorta ah.
Isu beddelka dadweynaha iyo bixiyeyaasha khaaska ah si nabadgelyo ah oo hufan si ay bixiyeyaasha gaarka loo leeyahay, halkii ay uga bixi lahaayeen dawladda, adeegyada daryeelka caafimaad, iyada oo doorka dawladdu ku xaddidan tahay horumarinta iyo hirgelinta heerar cusub oo daryeel caafimaad heer caalami ah.
Ku hirgal moodel maalgelin cusub iyadoo la adeegsanayo nidaam cusub oo caymiska caafimaadka khasabka ah.
Caymiska khasabka ah ee loogu talagalay dhammaan shaqaalaha, oo ay ku jiraan kuwa gudaha, waxaa maalgeliya maal-galiyeyaasha. Qorshaha caymiska caafimaadka khasabka ah ee shaqaalaha qaybta gaarka loo leeyahay, sida lagu hirgaliyay Abu Dhabi, wuxuu dhaqan gelayaa dalka oo dhan 2008. Astaamaha nidaamka cusub waxaa ka mid ah geedi socod dib-u-celin lacag-cad oo daahfuran, helitaan la awoodi karo oo loogu talagalay dhammaan deggeneyaasha iyo maalgelinta lagu kalsoonaan karo ee daryeelka caafimaad ee tayada leh ee Abu Dhabi.
Sanduuqa sadaqada ayaa sii wadi doona u shaqeynta dadka ajaanibta ah ee liitaa wuxuuna sidoo kale daboolayaa xaalado caafimaad oo aad u daran sida kansarka, kaadiheysiga, polytrauma iyo naafanimada.
Nidaam caymis caafimaad oo mideysan oo cusub oo loogu talagalay muwaadiniinta iyo kuwa aan ahaynba ayaa sidoo kale la qorsheeyay waxaana la filayaa in qorshaha ugu dambeyntii laga hirgaliyo dalka oo dhan.
Isutagga Imaaraatka Carabtu waa mid ka mid ah meelaha ugu safarka badan adduunka ee loo dalxiis tago iyo meheradaha ganacsi. Marti-gelinta carbeed ee dhaqameed iyo heerkulka qaboobaha ee raaxada ayaa lagu dhammaystiraa kaabayaal casri ah iyo adeegyo heer caalami ah.
Imaaraadku wuxuu kaloo noqday goob heer caalami ah oo shirarka lagu qabanayo, bandhigyo heer gobol iyo caalami ah iyo dhacdooyin waaweyn oo isboorti oo caalami ah sida Dubai Koobkii Adduunka ee faras-faraska, Abu Dhabi Formula One Grand Prix, Dubai Desert Classic Golf Tournament, FIFA Naadiga Club World Club, dabbaaldegyada filimka adduunka ee Dubai iyo sidoo kale Abu Dhabi, iyo iyadoo lala kaashanayo Aqalka Cad, Shirka Ganacsiga Caalamiga ah. Imaaraadku wuxuu ku guuleystey dalabka marti gelinta 2020 World Expo.
Wakiilka safarada ugu weyn ee Boqortooyada Ingiriiska, expedia.co.uk, wuxuu u xushay Abu Dhabi mid ka mid ah safarada ugu sareeya ee aduunka ee 10 safarada 2008. Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Dubai ayaa ku guuleysatay abaalmarinta garoonka dhexe ee bariga dhexe ee abaalmarinta safarka adduunka ee 2012.
Wax badan ayaa laga qabtaa gudaha UAE wixii ka baxsan Dubai iyo Abu Dhabi. Markii hore la dejiyey xilligii naxaasta ahaa, Sharjah waa caasimada dhaqan ee safaaradaha. Aagga Heritage ee Sharjah City waxaa ka mid ah Matitime Maritime Museum, madxaf islaami ah iyo matxafyo loogu talagalay farshaxanka carabiga casriga ah iyo casriga, iyo qaar kale oo badan.
Ajman wuxuu soo jiitaa dalxiisayaasha caalamiga ah ee leh xeebo qurux badan, sidoo kale Fujairah oo iyaduna bixisa qiiq iyo quusitaan iyo dalxiisyo Jasiiradda Musandam, oo caan ku ah dabeecada aan la shaacin ee jubbooyinka jiirarkeeda, dhagaxyada dhagxaanta dhaadheer iyo dhagaxyada dhagaxbuur.
Ras Al Khaima, oo ku taal soohdinta Cumaan, ayaa sida muuqata caan ku ah safarka maxalliga ah ee socdaalka ee buuraha Hajjar ee burburay.
Visa / Baasaboorrada loogu safri karo UAE
1) Macluumaadka Guud
All Hindida la Indian Baasaboorada shaqeynaya in kabadan lix bilood ayaa gali kara Imaaraadka.
2) Visa on Baasaboorrada Dibloomaasiga ah iyo kuwa rasmiga ah
Safaaradda ayaa ku bixisa fiisooyin Diplomaasi iyo Baasaboor rasmi ah oo keliya. Dukumentiyada loo baahan yahay tan waa:
Verbale oo ka socda Wasaaradda Arimaha Dibadda Hindiya (haddii ay jiraan Saraakiishii Dowladda India) ama Hawlwadeen Dibloomaasiyeed ee ay khusayso (haddii ay jiraan Dibloomaasiyiin ama Saraakiishii ka shaqeynayay Howlgalka Dibloomaasiyeed). Taariikhda soo gudbinta Qoraalka Xusuus-qorka waa in ay ahaataa hal bil gudaheeda taariikhda la soo saaray.
Foomka Codsiga ayaa lagu qorey Xarfaha 'Capital Letters'
Dhamaan Visa Foomka dalabka lama aqbali doono.
Foomka dalbashada Visa waa inuu codsaduhu ku saxeexo booska loogu talagalay saxeexiisa / eeda.
Ujeeddooyinka Maalgalinta ee UAE waa shuruud loo baahan yahay.
Govt. Mas'uuliyiintu waa inay u xusaan Qeybaha kafaalaqaada inay yihiin Safaaradooda ama Qunsulkooda UAE, Ujeedada galitaanka iyo Cinwaan buuxa.
Nuqulka Baasaboorka Midabka ah (Bogga Magaca, Macluumaadka Shaqsiyeed & Taariikhda Dhicitaanka) iyo Bogga Dambe (midab).
Hal sawir oo midab leh oo baasaboor leh (In la sii dhejiyo).
3) Dalxiis Dalxiis oo loogu talagalay UAE
Safaaradda Imaaraadku ma siiso fiiso ku saabsan baasaboorada caadiga ah.
Fiisaha dalxiiska ee Hindi Hindi ah, oo haysta baasaboor caadi ah, waxaa qabanqaabiya shirkad Imaaraad ah. Waxaa sidoo kale lagu heli karaa marka laga xajisto huteel ku yaal UAE ama iyada oo loo maro Emirates Airlines Office ama Xafiiska Duulista Hawada ama loo maro Wakiilka Safarka ee Hindiya.
4) Joojinta Visa
Safaaradda UAE ma baajiso fiisaha.
Si loo baajiyo fiisahaaga, waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto qofka ku kafaala qaadey UAE kaas oo kuu diyaariyey fiisadaada. Qofka ku kafaala qaadey wuxuu awood u leeyahay inuu baajiyo fiisahaagii hore. Adiga oo aan fiisadaadii hore la burin, ma heli kartid fiisaha UAE mana u safri kartid UAE.
Hannaanka Baasaboorada Dhisitaanka, oo ay kujirto fiiso Deganaansho UAE oo ansax ah.
Haddii ay dhacdo lumis baasaboor Hindi ah oo ay kujirto Fiisaha Deganaanshaha UAE, dukumiintiyada soo socda ayaa loo baahan yahay in lagu gudbiyo La-Taliyaha Safaaradda:
Foom lumis Baasaboor Xusuusin ah (oo ku qoran Waraaqaha Caadiga ah), oo ay ku qoran yihiin lambarrada codsadaha laba lambar (xagga hoose ee foomka).
Nuqul midab leh oo duug ah iyo baasaboor cusub.
Nuqulka midab leh ee UAE UAE UAE
Warqad ka timid kafaalasho bixiyaha UAE, oo sheegaya in codsaduhu ka tegey UAE isagoo fasax ka haysta.
Nuqul ah Warbixinta Booliis asalka ah ama FIR ee Ingiriisiga ah, oo ay caddeysay Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Hindiya (Taariikhda la soo saaray ee FIR waa inay ahaataa kahor taariikhda bixinta baasaboorka cusub).
Tarjumida ARABIC ee booliiska warbixintii Baasaboorkii lumay oo leh shaabadda Tarjubaanka Carabiga.
Hal Baasaboor Cabir Midabo leh.
Kharashka Dh 300 / -.
Marka dukumiintiyadaan la soo gudbiyo Wakiilka Safaaradda UAE, codsadaha waxaa la ogeysiin doonaa marka ogolaanshaha gelitaanka uu diyaar yahay.
Imaanshaha / Sharciynta dokumentiyada
1) Imaanshaha / Sharci Ahaanshaha Dokumentiyada
Shakhsiyaadka way soo gudbin karaan dokumentiyadooda OWN, ama dukumiintiyada XIDHIIDHKA DHALINYARADA, markay tusayaan caddeyn Aqoonsiga iyo caddeynta isqorista Dukumintiga asxaabta waxaa loo soo gudbin karaa KALIYA iyada oo loo marayo wakiilo idman.
Dukumiintiyada Ganacsi waxaa si toos ah u soo gudbin kara Shirkadda Idman - Shaqaalaha. Waraaqda maamulka ee Warqadda Shirkadda (oo ay ku qoran yihiin magaca Shaqaalaha iyo Shahaadada Shirkadda) iyo Aqoonsiga Shirkadda ayaa looga baahan yahay kiiskan.
2) Tallaabooyinka Imaatinka / Sharciynta Dukumeentiyada
Dukumiintiyada oo dhan waxay u baahan yihiin in marka hore ay qirato Qeybta Qunsuliyada ee Wasaaradda Arimaha Dibada India, ka dibna Qeybta Qunsuliyada, Vasant Kunj, New Delhi. Fadlan la soco in dukumiintiyada waxbarashadu ay u baahan yihiin inuu caddeeyo Wasaaradda Waxbarashada ee gobolka ay quseyso ka hor caddeynta 'Arimaha Dibadda'. Xaqiijinta Qeybta Qunsuliyada, UAE Dirham 156.06 waa khidmadaha dukumintiga iyo waqtiga waa 9: 00 AM illaa 2: 00 PM, Isniinta ilaa Khamiista, iyo 9: 00 AM illaa 12: 00 PM Jimcaha. Dukumintiga ayaa laga soo qaadan karaa isla maalintaas, inta u dhaxaysa 3: 00 iyo 4: 00 PM, Isniinta ilaa Khamiista, iyo 2: 30 PM illaa 3: 30 PM Jimcaha. Wixii su’aal ah, fadlan noogu soo dir cinwaanka: consular@uaeembassy-newdelhi.com
Shahaadooyinka kale sida Guurka, Dhalashada, Khibradda, Dhaarta, Fasaxyada Baasaboorada lumay, dukumiintiyada Ganacsiga, iwm waxay u baahan yihiin inay marqaati kacaan Wasaaradda Arimaha Dibadda India oo keliya. Hawsha inteeda kale waa isku mid. Khidmadda dukumiintiga ganacsigu waxay kuxirantahay arrinta isla markaana lacagta qaansheegta waxay ku kala duwan tahay qiimaha qaansheegadka. Fadlan la xiriir Qeybta Qunsulka Safaaradda UAE haddii aad wax su aalo ah qabtid.
3) Ujrooyinka Imaanshaha dukumintiga
Khidmadaha UAE Dirham
Dukumintiga waxbarashadda (shahaadooyinka, shahaadooyinka, shahaadooyinka iskuulka)
Shahaadada Shahaadada Hore
Shahaadada Ganacsiga ee Qaranka
Shahaadooyinka Madrasa iyo shahaadooyinka
Shahaadada Ku-meelgaarka ah
Baasaboor lumis ah
Awooda Qareenka (Shaqsi)
Shahaadada Caafimaadka Jirka
Shahaadada Falanqaynta Maandooriyaha
Shahaadada Diiwaangelinta Kalkaalisada
Shahaadada Astaamaha Booliiska
Shahaadada Heirship Legal
Nuqul kaararka Wadista, Baasaboorrada, iwm.
Ujrada khidmadaha qaansheegta Qiimaha Invoice
4) Dukumentiyada Ganacsiga
Xaqiijinta udhaxeysa dadka, halka shirkad laga furayo
Xaqiijinta iyadoo la qaadayo sheyga, marka gudaha lagu iibiyo
Xaqiijinta iyadoo la qaadayo sheyga, markii dibedda laga iibiyo
Awoodda qareenka si uu ganacsi uga furo gobolka gudahiisa.
Wax ka beddelidda raasumaalka saamiga.
Hordhac lammaane cusub.
Franchise - sameynta shirkad
Fur waax cusub oo shirkad ajnabi ka ah gobolka.
Fur meherado cusub oo shirkado ajnabi ah oo ka baxsan
gobolka maxalliga ah
Liisanka Ganacsiga (halka nuqulada loo qaybiyo in ka badan hal waddan si ay uga furaan laan gobol walba).
Guulihii laga gaadhay mashaariicdaas
dhammaystiray dhammaystirka cutub kasta,
dalka gudihiisa ama dibadiisa.
Miisaaniyadda maaliyadeed ee shirkadda
Miisaaniyadda maaliyadeed ee shirkadda sanad miisaaniyadeed kasta
Diiwaangelinta Shatiga Dalxiiska
Hay'adaha Ganacsiga (Gaarka ah / Kuwa Dadweynaha)
Soo saarista Shatiyada, Magacaabista Laanta Manager,
Furitaanka Brnach, Maareynta Quotas
Xaraash. xubin ka ahaanshaha Rugta Ganacsiga.
Daqiiqadaha Shirka Shirka Agaasimayaasha.
Nuqul ka mid ah wakaaladaha horay loo-xaqiijiyey ee kor ku taxan.
Khidmaddu way is beddeshaa wakhti kasta iyadoon ogeysiis hore la helin
5) Ujrooyinka qaansheegyada
Shahaadada Akhlaaqda wanaagsan
1) Helitaanka faraha ayaa laga caddeeyay Qunsuliyadda UAE
Si aad u hesho caddeyn caddeyn ah oo boolis ah oo ka timaada Imaaraad kasta oo Imaaraad ah, musharraxu waa inuu faraha ka qaataa saldhigga booliiska ee magaaladiisa, ka dibna Wasaaradda Guriga ee dowladdiisa ka dibna Wasaaradda Dibedda. Arimaha Hindiya. Cinwaanka xafiiskooda Delhi waa Qeybta Qunsuliyada, Guriga Patiala, Tilak Marg, una dhow India Gate. Xafiisyada kale ee Wasaaradda Arimaha Dibadu waxay ku yaalaan Chennai, Guwahati, Hyderabad iyo Kolkata. Musharraxu wuxuu sidoo kale toos ula xiriiri karaa qaybta Farta faraha ee Patiala House si faraha looga qaado. Xaashiyaha farta lagu fiiqay ka dib waa in lagu soo gudbiyaa Safaaradda UAE (iskiis ha noqotee, ama iyada oo loo sii marayo qaraabada dhiigiisa, ama iyada oo loo sii marayo wakiiladeena loo idmay) laga bilaabo 9: 00 am to 12: 00 pm, Isniinta ilaa Jimcaha. Rs.3,750 / - waa khidmadkiiba shahaado IN CASH, iyo dukumiintiga waxaa lagu soo celin lahaa isla maalintaas, inta u dhaxaysa 3: 00 pm iyo 4: 00 pm.
2) U soo diritaanka Faraha faraha leh UAE
Mar alla markii aad ka soo hesho wakiilka faraha farta la galiyay wakiilka, waa inaad u dirtaa wakaalada ku haboon ee UAE. Fadlan ku dar waxyaabaha soo socda.
Foomka faraha ayaa sharciyeysiiyay Qunsuliyadda UAE
Nuqul ka mid ah ruqsadda degenaanshadaadii hore ee dalka Imaaraatka
Nuqul ka mid ah baasaboorkaagii dhowaa
Laba sawir oo leh sawirro baasaboor-midab leh
Wixii ajuuro ah ee loo baahan yahay (waxay kuxirantahay xukunka)
Xidhmadaada u dir wakaaladaha arimaha gudaha ee ay khusayso hoos. Kahor intaadan dirin dukumiintiga, fadlan wac Xafiiska UAE si aad u hesho macluumaadka khidmadaha loo baahan yahay, iyo inaad hubiso inaad u direyso xukunka ku habboon.
Qeybta Guud ee Baarista Dambiyada
Ruqsadaha iyo Qeybta Shahaadooyinka
Booliska Dubai General HQ
Taleefoon: 971-4-2013484 / 2013564
Fakis: 971-4-2171512 / 2660151
Qeybta Booliska - Abu Dhabi
Waxaan soo jeedineynaa inaad dukumiintiyada u dirto saaxiib ku sugan Imaaraadka, si saaxiibkaa uu ka helo shahaadada Waaxda Boliiska asaga adiga ku matalayo. Tani waxay si weyn u yareyn doontaa waqtiga howsha marka la barbar dhigo u diritaanka dukumiintiyada si toos ah Waaxda Boliiska.
Liiska Daawooyinka Xaddidan ee UAE
Hoos waxaa ku qoran liistada Daawooyinka La Daaroodo iyo Daawooyinka, oo laga diiwaangaliyay Wasaaradda Caafimaadka ee UAE waxaana hirgelinaya Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Isutagga Caalamiga ah ee Maareynta Maandooriyaha (INCB).
Su'aalo dheeri ah ayaa loo gudbin karaa Waaxda Xakamaynta Maandooriyaha ee Wasaaradda Caafimaadka ee UAE ee Abu Dhabi, PO Box 848, Fakis: + 971 2 6313 742.
Liiska soo socdaa wuxuu muujinayaa lambarka taxanaha, magaca ganacsiga, magaca guud iyo nooca dawada.
Kiniiniyada 1, 123 COLD Tablets, Codeine phosphate 8mg, Acetaminophen 325mg, Cafeine 30mg, Carbinoxamine labate 3.06mg, Phenylephrine 5mg, Kiniiniyada
2, ABILIFY 10mg, Aripiprazole 10mg, Kiniiniyada
3, ABILIFY 15mg, Aripiprazole 15mg, Kiniiniyada
4, ABILIFY 20mg, Aripiprazole 20mg, Kiniiniyada
5, ABILIFY 30mg, Aripiprazole 30mg, Kiniiniyada
8, ACTIVELLE, Estradiol & Norethisterone, Kiniinno
9, ADOL qabow, Dextromethorphan HBr 15mg, Pseudoephedrine HCL 30mg, Paracetamol 325mg, Caplets
11, xarunta ADOL, Codeine phosphate 10mg, Paracetamol 150mg, Cafeine 50mg, Salicylamide 200mg, Kiniiniyada
12, AKINETON 2mg, Biperiden HCL 2mg, Kiniinno
13, AKINETON 5mg, Biperiden Lactate 5mg / ml, Duritaan
14, AKINETON RETARD 4mg, Biperiden HCL 4mg, Kiniinno
15, ALGAPHAN, Dextropropoxyphene HCL 25mg Paracetamol 300mg, Kiniiniyada
16, ALGAPHAN, Propoxyphene HCL 75mg Chlorobutanol 10 mg / 2ml, Durid
17, ANAFRANIL 10, Clomipramine HCL 10 mg, Kiniiniyada
18, ANAFRANIL 25, Clomipramine HCL 25 mg, Kiniiniyada
19, ANAFRANIL SR 75, Clomipramine HCL 75 mg, Kiniiniyada
21, ANEXATE 0.5mg / 5ml, Flumazenil 0.1mg / ml, Durid
22, ANEXATE 1mg / 10ml, Flumazenil 0.1mg / ml, Durid
23, ARTANE 2, Benzhexol HCL 2 mg, Kiniiniyada
24, ARTANE 5, Benzhexol HCL 5mg, Kiniiniyada
25, ARTHROTEC 50, Misoprostol 0.2mg Diclofenac sodium 50mg, Kiniinno
26, ATIVAN 1, Lorazepam 1mg, Kiniinno
28, AURORIX 100, Moclobemide 100mg, Kiniiniyada
29, AURORIX 150, Moclobemide 150mg, Kiniiniyada
30, AURORIX 300, Meclobemide 300 mg, Kiniiniyada
31, BARNETIL 200mg / 2ml, Sultopride 200mg / 2ml, Durid
32, BARNETIL 400, Sultopride 400mg, Kiniinno
33, BENZTRONE 5mg / ml, Oestradiol Benzoate 5mg / ml, Durid
35, BRONCHOLAR, Dextromethorphan HBr 7.5mg Guaifenesin 50mg, Ephedrine HCl 7.5mg, Chlorpheniramine maleate 1.25mg / 5ml, Isku-dhafka
36, BRONCHOLAR forte, Dextromethorphan HBr 15mg Ephedrine HCL 7.5mg, Guaifenesin 50mg, Chlorpheniramine maleate 1.25mg / 5ml, Isku qas
38, BUCCASTEM 3mg, Prochlorperazine Maleate 3mg, Kiniinno
39, BUSPAR 10, Buspirone HCL 10mg, Kiniiniyada
40, BUSPAR 30 mg, Buspirone HCl 30 mg, Kiniiniyada Dividose
41, BUSPAR 5, Buspirone HCL 5 mg, Kiniiniyada
42, CAMCOLITE 250, Lithium Carbonate 250mg, Kiniiniyada
43, CAMCOLITE 400, Lithium Carbonate 400mg, Kiniiniyada
44, CANTOR 50, Minaprine 50mg, Kiniiniyada
47, CIPRALEX 10mg, Escitalopram (sida Escitlopram oxalate) 10mg / kiniin, Kiniinno
49, CIPRALEX 15mg, Escitalopram (sida Escitlopram oxalate) 15mg / kiniin, Kiniinno
51, CIPRALEX 20mg, Escitalopram (sida Escitlopram oxalate) 20mg / kiniin, Kiniinno
53, CIPRALEX 5mg, Escitalopram (sida Escitlopram oxalate) 5mg / kiniin, Kiniinno
54, CIPRAM 20, Citalopram 20 mg, Kiniiniyada
55, CLIMEN, Micronised Estradiol Valerate (casaan) 2mg / 1tab, Micronised Estradiol Valerate (cad) 2mg / 1tab, Micronised Cyproterone Acetate (Pink) 1mg / 1 tab.
56, CLOPIXOL 2, Zuclopenhtixol diHCL 2mg, Kiniiniyada
57, CLOPIXOL 25, Zuclopenhtixol diHCL 25mg, Kiniiniyada
58, CLOPIXOL -Acuphase 100mg, Zuclopenhtixol acetate 100mg / 2ml, Durid
59, CLOPIXOL Depot 200, Zuclopenhtixol waxay sharraxaysaa 200mg / ml, Durid
60, CLOPIXOL Depot 500, Zuclopenhtixol acetate 500mg / ml, Durid
61, CLOPIXOL10, Zuclopenhtixol diHCL 10mg, Kiniiniyada
62, CLOPIXOL-Acuphase 50mg, Zuclopenhtixol acetate 50mg / ml, Durid
69, CODIPRONT Cum Exp., Codeine 30mg, Phenyltoloxamine 10mg, Guaifenesin 100mg, Kiniinno
70, CODIS, Aspirin 500 mg, Codeine Phosphate 8 mg, Kiniiniyada
72, CYTOTEC, Misoprostol 200mcg, Kiniinno
73, DEANXIT, Flupentixol diHCL 0.5mg, Melitracene HCL 10mg, Kiniiniyada
74, DECA DURABOLIN 25mg / ml, Nandrolone Decanoate 25mg / ml, Durid
75, DECA DURABOLIN 50mg / ml, Nandrolone Decanoate 50mg / ml, Durid
76, DEHYDROBENZ-PERIDOL, Droperidol 2.5mg / ml, mudis
77, DEMETRIN 10, Prazepam 10mg, Kiniiniyada
80, DHC CONTINUS, Dihydrocodeine tartrate 60mg, Kiniiniyada
81, DIALAG microclysma, Diazepam 5mg / 2.5ml, Xalka Rectal
82, DIALAG microclysma, Diazepam 10mg / 2.5ml, Xalka Rectal
83, DIAPAM 10, Diazepam 10mg, Kiniinno
84, DIAPAM 2, Diazepam 2mg, Kiniinno
85, DIAPAM 5, Diazepam 5mg, Kiniinno
86, DIARSED, Diphenoxylate HCL 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Kiniiniyada
87, DIAXINE, Diphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Kiniiniyada
88, DIAZEPAM 2, Diazepam 2mg, Kiniiniyada
89, DIAZEPAM 5, Diazepam 5mg, Kiniiniyada
91, DIPRIVAN 1% w / v, Propofol 1.00% w / v, IV Faleebo
92, DIPRIVAN 2% w / v, Propofol 20mg / 1ml, IV Faleebo
93, DISTALGESIC, Propoxyphene HCL 32.5mg Paracetamol 325mg, Kiniinno
94, DOGMATIL 100, Sulpiride 100 mg / 2ml, Durid
95, DOGMATIL 25mg / 5ml, Sulpiride 25mg / 5ml, Xalka
97, DOGMATIL Forte, Sulpiride 200 mg, Kiniiniyada
98, DORMICUM 15, Midazolam 15mg, Kiniinno
99, DORMICUM 15mg / 3ml, Midazolam 15mg / 3ml, Durid
100, DORMICUM 5mg / ml, Midazolam 5mg / ml, Durid
101, DORMICUM 7.5mg, Midazolam 7.5mg, Kiniiniyada
102, DORSILON, Mephenoxalone 200mg, Paracetamol 450mg, Kiniinno
103, EDRONAX 4mg, Reboxetine 4mg, Kiniiniyada
104, EFEXOR 37.5, Venlafaxine 37.5mg, Kiniiniyada
105, EFEXOR 75, Venlafaxine 75mg, Kiniiniyada
108, ESTRACOMB TTS, Oestradiol 4mg, Norethisterone acetate 30mg (Patch 1) + Oestradiol 10mg (Patch 2), Baloocyo
109, ESTRADERM TTS 100, Estradiol 8mg / 20cm2, Gawaarida
110, ESTRADERM TTS 25, Estradiol 2mg / 5cm2, Gawaarida
111, ESTRADERM TTS 50, Estradiol 4mg / 10cm2, Gawaarida
112, ESTROFEM, Oestradiol 2mg, Kiniinno
113, ESTROFEM FORTE, Oestradiol 4mg, Kiniinno
114, FAVERIN 100, Fluvoxamine labate 100mg, Kiniiniyada
115, FAVERIN 50, Fluvoxamine labate 50mg, Kiniiniyada
116, FEMOSTON 2 / 10, Dydrogesterone (Y) 10mg, Estradiol (O) 2.0mg, Estradiol (Y) 2.0mg, Kiniiniyada
117, FLEXIBAN, Cyclobenzaprine HCL 10mg / tab., Kiniiniyada
118, FLUANXOL 0.25, Flupenthixol 0.25mg, Kiniiniyada
119, FLUANXOL 0.5, Flupenthixol 0.5mg, Kiniiniyada
120, FLUANXOL 1, Flupenthixol 1mg, Kiniiniyada
121, FLUANXOL 3, Flupenthixol 3mg, Kiniiniyada
122, FLUANXOL Depot, Flupenthixol 20mg / ml, Durid
123, FLUANXOL Depot, Flupentixol decanoate 100mg / ml, Duritaan
127, FLUXETYL 20mg, Fluoxetine (sida F. Hydrochloride) 20mg / kaabsoosha,
128, FRISIUM 10, Clobazam 10 mg, Kiniiniyada
129, FRISIUM 20, Clobazam 20 mg, Kiniiniyada
130, GARDINAL SODIUM, Phenobarbitone sodium 200mg / ml, Durid
131, GENOTROPIN 16 IU (5.3mg), Somatropin 16IU / 1Cartridge, Powder for muding
132, GENOTROPIN 36 IU (5.3mg), Somatropin 36IU / 1Cartridge, Powder for muding
133, HALDOL 0.5, Haloperidol 0.5mg, Kiniinno
134, HALDOL 2mg / ml, Haloperidol 2mg / ml, Dhibco
135, HALDOL 5, Haloperidol 5mg, Kiniinno
136, HALDOL 5mg / ml, Haloperidol 5mg / ml, Duritaan
137, HALDOL Decanoas, Haloperidol 50mg / ml, Durid
138, HALDOL Decanoas, Haloperidol 100mg / ml, Durid
140, IMUKIN 100mcg / 0.5ml, Recombinant Human Interferon-gamma 6000000 IU / ml, Durid *
141, INSIDON 50, Opipramol 50mg, Kiniinno
142, INTARD, Diphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Kiniiniyada
143, INTRAVAL, Thiopentone Sodium 0.5g / 1vial, Durid
147, KEMADRIN 10mg / 2ml, Procyclidine HCL 10mg / 2ml, Durid
148, KEMADRIN 5mg, Procyclidine HCL 5mg, Kiniinno
149, KETALAR 10, Ketamine HCL 10mg / ml, Durid
150, KETALAR 50, Ketamine HCL 50mg / ml, Durid
151, KLIOGEST, Oestradiol 2mg, Norethisterone 1mg, Kiniinno
152, LAGAFLEX, Carisoprodol 300 mg, Paracetamol 250mg, Kiniinno
154, LARGACTIL 10, Chlorpromazine HCL 10mg, Kiniinno
155, LARGACTIL 100, Chlorpromazine HCL 100mg, Kiniinno
156, LARGACTIL 25, Chlorpromazine HCL 25mg, Kiniinno
157, LARGACTIL 25mg / ml, Chlorpromazine HCL 25mg / ml, Durid
158, LARGACTIL 50, Chlorpromazine HCL 50mg, Kiniinno
159, LARGACTIL 50mg / 2ml, Chlorpromazine HCL 50mg / 2ml, Durid
161, LEXOTANIL 1.5, Bromazepam 1.5 mg, Kiniiniyada
162, LEXOTANIL 3, Bromazepam 3 mg, Kiniiniyada
163, LEXOTANIL 6, Bromazepam 6 mg, Kiniiniyada
165, LIORESAL 10, Baclofen 10 mg, Kiniiniyada
166, LIORESAL 25, Baclofen 25 mg, Kiniiniyada
167, LOMOTIL, Diphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Kiniiniyada
168, LUDIOMIL 10, Maprotiline HCL 10mg, Kiniinno
169, LUDIOMIL 25, Maprotiline HCL 25mg, Kiniinno
170, LUDIOMIL 50, Maprotiline HCL 50mg, Kiniinno
171, LUDIOMIL 75, Maprotiline HCL 75mg, Kiniinno
173, MELLERIL 10, Thioridazine HCL 10mg, Kiniiniyada
174, MELLERIL 100, Thioridazine HCL 100mg, Kiniiniyada
175, MELLERIL 25, Thioridazine HCL 25mg, Kiniiniyada
176, MELLERIL 50, Thioridazine HCL 50mg, Kiniiniyada
177, MENOGON 75IU, Menotrophin HMG 75IU / 1Ampoule, Durid
178, MUSCADOL, Orphenadrine citrate 35mg, Paracetamol 450mg, Kiniinno
179, MYOGESIC, Orphenadrine 35mg, Paracetamol 450mg, Kiniinno
184, NOCTRAN 10, Clorazepate dipot potassium 10mg, Acepromazine maleate 1.016mg, Aceprometazine maleate 10.16mg, Kiniinno
185, NORACOD, Codeine 10mg, Paracetamol 500mg, Kiniinno
186, NORCURON 10mg, Vecuronium Bromide 10mg / ampoule, Powder for mudis
187, NORCURON 4mg, Vecuronium Bromide 4.0mg / ampoule, Powder for mudis
188, NORDITROPIN 12IU, Somatropine 12 IU, Durid
189, NORDITROPIN 4IU, Somatropine 4 IU, Durid
190, NORDITROPIN Pen set 12, Somatropine 12 IU, Durid S / C
191, NORDITROPIN Pen set 24, Somatropine 24 IU, Durid S / C
5mg / 1.5 ml, Somatropin, Inj ee qalin loo diyaariyay
10mg / 1.5 ml, Somatropin, Inj. ee qalinka la buuxiyay
15mg / 1.5 ml, Somatropin, Inj. ee qalinka la buuxiyay
198, NORFLEX, Orphenadrine citrate 30mg / ml, Duris
199, NORFLEX 100, Orphenadrine citrate 100mg, Kiniiniyada
200, NORGESIC, Orphenadrine citrate 35mg Paracetamol 450mg, Kiniinno
201, NUBAIN 10mg / ml, Nalbuphine HCL 10mg / ml, Durid
202, NUBAIN 20mg / ml, Nalbuphine HCL 20mg / ml, Durid
204, ORAP, Pimozide 1mg, Kiniiniyada
205, ORAP Forte, Pimozide 4mg, Kiniiniyada
206, OXETINE, Fluoxetine Hydrochloride 20mg, Kiniinno
208, PARACODOL, Codeine phosphate 8mg, Paracetamol 500mg, Kiniinno
210, PHYSEPTONE, Methadone HCL 10mg / ml, Durid
211, PHYSEPTONE 5, Methadone HCL 5mg, Kiniiniyada
212, PREPULSID, Cisapride 1mg / ml, Hakinta
214, PREPULSID 10mg, Cisapride 10mg, Kiniinno
215, PREPULSID 5mg, Cisapride 5mg, Kiniinno
216, PRIMOTESTONE depot 100mg, Testosterone Enanthate 110mg, Testosterone Propionate 25mg, = Testosterone 100mg / ml, Durid
217, PRIMOTESTONE depot 250mg, Testosterone enanthate 250mg / 1ml, Durid
218, PROGYLUTON, Estradiol Valerate 2mg / 11white tab., Estradiol Valerate 2mg & Norgestrol 0.5mg / 10 tab tab., Kiniiniyada
219, PROKINATE, Cisapride 5mg / 5ml, Joojinta
220, PROKINATE 10mg, Cisapride 10mg, Kiniinno
221, PROKINATE 5mg, Cisapride 5mg, Kiniinno
222, PROLIXIN 25mg / ml, Fluphenazine ayaa dib u qeexeysa 25mg / ml, Duritaan
223, PRESS, Prostaglandin E2 10mg / pessary, Vaginal Pessaries
225, PROTHIADEN 75, Dothiepin HCl 75mg, Kiniinno
226, PROVIRON, Mesterolone 25mg, Kiniiniyada
227, PROZAC, Fluoxetine 20mg, Kiniinno
229, PROZAC Toddobaadkii 90mg, Fluoxetine (sida F. Hydrochloride) 90mg / kaabsoosha,
232, REMERON 15 mg, Mirtazapine 15mg, Kiniiniyada
233, REMERON 30 mg, Mirtazapine 30mg, Kiniiniyada
234, REMERON 45 mg, Mirtazapine 45mg, Kiniiniyada
235, Remeron Sol Tab 30mg, Mirtazapine, Kiniiniyada
236, REVACOD, Codeine Phosphate 10mg, Paracetamol 500mg / 1 tab., Kiniiniyada
239, RISPERDAL 1, Risperidone 1mg, Kiniiniyada
240, RISPERDAL 1mg / ml, Risperidone 1mg / 1ml, Xalka Afka
241, RISPERDAL 2, Risperidone 2mg, Kiniiniyada
242, RISPERDAL 3, Risperidone 3mg, Kiniiniyada
243, RISPERDAL 4, Risperidone 4mg, Kiniiniyada
247, RITALIN 10, Methylphenidate HCL 10mg, Kiniinno
248, RITALIN SR 20mg, Methylphenidate HCL 20mg / 1tab., Kiniiniyada
249, RIVOTRIL 0.25%, Clonazepam 0.25%, Dhibco
250, RIVOTRIL 0.5, Clonazepam 0.5 mg, Kiniiniyada
251, RIVOTRIL 1mg / ml, Clonazepam 1mg / ml, Duritaan
252, RIVOTRIL 2, Clonazepam 2mg, Kiniiniyada
257, ROBAXIN, Methocarbamol 100mg / ml, Duris
258, ROBAXIN 500, Methocarbamol 500mg, Kiniiniyada
259, ROBAXISAL, Methocarbamol 400mg, Aspirin 325mg, Kiniinno
261, ROMILAR 1.5%, Dextromethorphan 15mg / ml, Hoos u dhig
263, ROMILAR KA HOR
264, SAIZEN 4 IU, Somatropine 4 IU, Durid
266, SANDOSTATIN 0.05, Octreotide 0.05mg / ml, Duris
267, SANDOSTATIN 0.1, Octreotide 0.1mg / ml, Duris
268, SANDOSTATIN 0.2, Octreotide 0.2mg / ml, Duris
269, SANDOSTATIN 0.5, Octreotide 0.5mg / ml, Duris
273, SEDOFAN-P, Dextromethorphan HBr 15mg, Kiniiniyada
274, SERENACE 0.5, Haloperidol 0.5mg, Kiniinno
275, SERENACE 1.5, Haloperidol 1.5mg, Kiniinno
276, SERENACE 10, Haloperidol 10mg, Kiniinno
277, SERENACE 5, Haloperidol 5mg, Kiniinno
278, SEROQUEL 100 mg, Quetiapine 100 mg, Kiniiniyada
279, SEROQUEL 200 mg, Quetiapine 200 mg, Kiniiniyada
280, SEROQUEL 25 mg, Quetiapine 25 mg, Kiniiniyada
281, Xidhmada bilowga ah ee Bukaanka SEROQUEL, Quetiapine 100 mg / tab. (Kiniiniyada 2), Quetiapine 25 mg / tab. (Kiniiniyada 6), Kiniiniyada
282, SEROXAT 20, Paroxetine 20mg, Kiniinno
283, SERZONE 100mg, Nefazodone HCL 100mg, Kiniinno
284, SERZONE 150mg, Nefazodone HCL 150mg, Kiniinno
285, SERZONE 200mg, Nefazodone HCL 200mg, Kiniinno
286, SERZONE 250mg, Nefazodone HCL 250mg, Kiniinno
287, SERZONE 50mg, Nefazodone HCL 50mg, Kiniinno
288, SIRDALUD 2, Tizanidine 2mg, Kiniinno
289, SIRDALUD 4, Tizanidine 4mg, Kiniinno
290, SOMADRYL xarunta, Carisoprodol 200mg Paracetamol 160mg, Caffeine 32mg, Kiniiniyada
293, SOSEGON 50mg, Pentazocine HCL 56.4mg, Kiniinno
294, ST.JOSEPH qufaca, Dextromethorphan HBr 0.1179% w / w, Syrup
295, STADOL 1mg / ml, Butorphanol tartrate 1mg / ml, Duritaan
296, STADOL 2mg / ml, Butorphanol tartrate 2mg / ml, Duritaan
297, STADOL 4mg / 2ml, Butorphanol tartrate 4mg / 2ml, Durid
298, STELAZINE 1, Trifluoperazine 1mg, Kiniiniyada
302, STELAZINE 5, Trifluoperazine 5mg, Kiniiniyada
304, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 25mg, Kiniinno
305, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 5mg, Kiniinno
306, STEMETIL, Prochlorperazine maleate12.5mg / ml, Duris
307, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 25mg / 2ml, Durid
308, STERANDRYL RETARD 250mg, Testosterone Hexahydrobenzoate 125mg, Trans-hexahydroterephtalate of n-butyl iyo Testosterone 125mg / ampoule, Durid
310, STESOLID, Diazepam 2mg, Kiniiniyada
311, STESOLID, Diazepam 5mg, Kiniiniyada
312, STESOLID, Diazepam 5mg / ml, Duris
313, STESOLID, Diazepam 5mg / 2.5ml, Xalka Rectal
314, STESOLID, Diazepam 10mg / 2.5ml, Xalka Rectal
315, STILNOX 10mg, Zolpidem Tartrate 10mg / 1 tab., Kiniiniyada
317, SUBUTEX 2mg, Buprenorphine HCL 2mg / 1tab., Kiniiniyada
318, SUBUTEX 8mg, Buprenorphine HCL 8mg / 1tab., Kiniiniyada
319, SURMONTIL 25, Trimipramine maleate 35mg, Kiniiniyada
321, SUSTANON 250mg, Testosterone Propionate 30mg, Testosterone Phenylpropionate 60mg, Testosterone isocaproate 60mg, Testosterone decanoate 100mg, Durid
322, TEKAM 10, Ketamine HCL 10mg / ml, Durid
323, TEKAM 50, Ketamine HCL 50mg / ml, Durid
324, TEMGESIC 0.3mg / ml, Buprenorphine HCL 0.3 mg / ml, Durid
325, TEMGESIC 0.6mg / 2ml, Buprenorphine HCL 0.6mg / 2ml, Durid
326, TEMGESIC Sublingual, Buprenorphine HCL 0.2 mg, Kiniiniyada
327, TIAPRIDAL 100, Tiapride 100mg, Kiniiniyada
328, TIAPRIDAL 100mg / 2ml, Tiapride 100mg / 2ml, Durid
329, TICLID, Ticlopidine 250mg, Kiniinno
331, TOFRANIL 10, Imipramine 10mg, Kiniiniyada
332, TOFRANIL 25, Imipramine 25mg, Kiniiniyada
334, TRAMAL 100mg / 2ml, Tramadol 100mg / 2ml, Durid
335, TRAMAL 100mg / ml, Tramadol 100mg / ml, Dhibco
337, TRAMAL 50mg / ml, Tramadol 50mg / ml, Durid
338, TRAMAL Retard 100, Tramadol 100mg, Kiniinno
339, TRAMUNDIN RETARD 100 mg, Tramadol 100mg, Kiniiniyada
340, TRAMUNDIN RETARD 150 mg, Tramadol 150mg, Kiniiniyada
341, TRAMUNDIN RETARD 200 mg, Tramadol 200mg, Kiniiniyada
344, TREXAN 50, Naltrexone HCL 50mg, Kiniiniyada
345, TRISEQUENS, Oestradiol 2mg (tab buluug), Oestradiol 2mg, Norethisterone acetate 1mg (tab cad), Oestradiol 1mg (tab cas), Tababbado
346, TRISEQUENS forte, Oestradiol 4mg (tab jaale), Oestradiol 4mg, Norethisterone acetate 1mg (tab cad), Oestradiol 1mg (tab cas), Kiniiniyada
347, TRYPTIZOL 25, Amitriptyline HCL 25 mg, Kiniiniyada
349, TUSSIFIN oo leh codeine, Codeine phosphate 75mg Chlorpheniramine maleate 25mg, Glyceryl guaicolate 1gm, Sodium benzoate 3gm, Xumbo-weydaar 3gm, Liquorice 7.5gm / 100ml, Syrup
350, ULTIVA 1mg, Remifentanil 1mg / vial, Duritaan
351, ULTIVA 2mg, Remifentanil 2mg / vial, Duritaan
352, ULTIVA 5mg, Remifentanil 5mg / vial, Duritaan
355, VALIUM, Diazepam 10mg / 2ml, Duris
356, VALIUM 10, Diazepam 10mg, Kiniinno
357, VALIUM 2, Diazepam 2mg, Kiniinno
358, VALIUM 5, Diazepam 5mg, Kiniinno
359, VECURONIUM BROMIDE FOR INJECTION 10mg, Vecuronium Bromide 10mg / 1 vial, Powder for muding
360, VECURONIUM BROMIDE FOR INJECTION 20mg, Vecuronium Bromide 20mg / 1 vial, Powder for muding
362, VIRORMONE 10mg, Testosterone Propionate 10mg, Durid
363, VIRORMONE 10mg, Testosterone Propionate 10mg, Kiniinno
364, VIRORMONE 25mg, Testosterone Propionate 25mg, Kiniinno
365, VIRORMONE 25mg, Testosterone Propionate 25mg, Durid
366, XANAX 0.25, Alprazolam 0.25 mg, Kiniiniyada
367, XANAX 0.5, Alprazolam 0.5 mg, Kiniiniyada
368, XANAX 1, Alprazolam 1 mg, Kiniiniyada
370, ZOLOFT, Sertraline 50mg, Kiniiniyada
371, ZYPREXA 10 mg, Olanzapine 10 mg, Kiniiniyada
372, ZYPREXA 10 mg, Olanzapine 10 mg, Durid
373, ZYPREXA 5 mg, Olanzapine 5 mg, Kiniiniyada
374, ZYPREXA 7.5 mg, Olanzapine 7.5 mg, Kiniiniyada
XAFIISKA GUDDOOMIYAHA / XUKUUMADAHA
Dawlada Hoose ee Abu Dhabi Xoghaynta Golaha
Rugta Ganacsiga & Warshadaha ee Ajman Guddiga Qorsheynta
Dawlada Hoose ee Abu Dhabi Wasaaradda Beeraha
Difaaca Madaniga ah ee Dubai Waaxda Tamarta Atomiga
Rugta Ganacsiga & Warshadaha Dubai Wasaaradda Kiimikada & Bacriminta
Dawlada Hoose ee Magaalada Dubai Wasaaradda Duulista Hawada
Golaha Qaranka ee Federaalka Wasaaradda Dhuxusha & Macdanta
Xiriirka Ganacsi ee UAE & Warshadaha Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha
Wasaaradda Dhaqaalaha & Ganacsiga Wasaaradda Isgaarsiinta
Wasaaradda Korontada & Biyaha Wasaaradda Shirkadaha
Wasaaradda Caafimaadka Wasaaradda Macaamiisha & Qeybinta Dadweynaha
Wasaaradda Wasiiru dowlaha Arimaha Gudaha Wasaaradda Dhaqanka
Wasaaradda Waxbarashada & Dhallinyarada Wasaaradda Beeraha
Wasaaradda Maaliyadda & Warshadaha Wasaaradda Deegaanka iyo Dhirta
Wasaaradda Qorsheynta Wasaaradda Arimaha Dibadda
Dawlada Hoose ee Sharjah Wasaaradda Maaliyadda
Rugta Ganacsiga & Warshadaha ee Sharjah Warshadaha Warshadaynta Cunnada
Dowlada UAE Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Qoyska
Xiriirka Labada Dal UAE-INDIA
Xiriirka dhaqaale ee Imaaraadku, siyaasadiisa iyo dhaqankiisa uu la leeyahay India, oo taariikhdu ku beegan tahay wax ka badan qarni ka hor, waa qaan iyo dhinacyo badan. Ganacsiga laba geesoodka ah ayaa si isdaba joog ah u koraya sannadihii la soo dhaafay iyo xiriirka dadka-ka-imanaya dadku si joogto ah ayey u kordhayaan. Dalxiisayaasha ka kala socda labada dhinacba waxay u booqanayaan damaashaad iyo madadaalo, inbadan oo muwaadiniin UAE ahna waxay ka helayaan xarumaha daryeelka caafimaadka iyo xarumaha dalxiiska ee Hindiya.
Xiriir dhow oo dhexmara bulshada India iyo dhalashada ayaa laga xukumi karaa xaqiiqda ah in bulshada Hindiya ay tahay jaaliyadaha ugu badan ee qurbaha ku nool Imaaraadka, oo tiradooda lagu qiyaaso ilaa 1.5 milyan. Xiriir adag oo saaxibtinimo oo ka dhexeeya Imaaraatka iyo Hindiya waxaa lafilayaa in la sii ballaariyo oo la xoojiyo bilaha iyo sanadaha soo socda.
Faahfaahinta wareysiga uu la yeeshay Safiirka Hindiya u fadhiya UAE Talmiz Ahmed.
Xiriirka ka dhexeeya Imaaraadka iyo Hindiya waa mid xoogan oo ku saleysan xiriir dhaqameed ka dhexeeya dadka labada dal. Waa maxay xidhiidhka taariikhiga ah ee xiraya labada qaran iyo maxay yihiin xeeladaha cusub ee lagu xoojinayo xiriirkooda dhaqan iyo dhaqan?
Xiriirka India iyo UAE ayaa sare u sii kacaya. Labada dal waxay wadaagaan xiriir ka dhexeeya xiriir dhaqan iyo xiriir wanaagsan oo ganacsi iyo dhaqan. Xiriirkeena sii ballaaranaya wuxuu daboolayaa baaxad balaaran oo dhaqaale, farsamo, bulsho iyo dhaqameed kuwaas oo si wada jir ah ugu faa iideeya labada shacab.
Ujeedo ku saabsan xiriirka sii koraya ee India kala dhexeeya waddamada Khaliijka, gaar ahaan Imaaraadka, waxaa bixiyay booqashada Wasiirka Arimaha Dibada Shaikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan uu ku yimid India bishii Juun. Intii lagu jiray booqashada, labada dhinac waxay lahaayeen doodo miro dhal ah oo wax ku ool ah oo ku saabsan mowduucyo aad u kala duwan, oo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal, xaaladda gobolka, amniga, gaashaandhigga iyo tamarta dib loo cusbooneysiin karo. Laga soo bilaabo dhinaca Hindiya, ka dib Wasiirka Arimaha Dibadda Pranab Mukherjee iyo Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Kamal Nath waxay booqdeen UAE bishii Meey iyo Abril 2008, siday u kala horreeyaan.
Xiriirkeenna laguma go'aamin dhinacyada ganacsiga iyo dhaqaalaha kaligiis. Hindidu waxay joogi jirtay UAE muddo dheer kahor intaan saliida la helin waxayna door muhiim ah ka ciyaareen horumarka dalka. Waxay wada shaqeyn firfircoon la lahaayeen martigeliyayaashooda Emiraati Hoggaamiyeyaasha UAE waxay dhowr jeer qirteen tabarucaadda ay Hindiya ka sameeyeen dhinacyo kala duwan.
Waa maxay horumarka ka jira ganacsiga iyo ganacsiga u dhexeeya labada dal?
India iyo Imaaraadku waxay samaynayaan dadaal xoogan si ay u cusbooneysiiyaan oo ay u xoojiyaan xiriirka laba geesoodka ah ee ganacsiga iyo ganacsiga. Xiriirka ka dhexeeya labada dal wuxuu u horseeday iskaashi muhiim ah xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga, iyadoo Imaaraadku u muuqdo inuu yahay suuqa labaad ee ugu weyn adduunka ee wax soo saarka Hindiya. Isla mar ahaantaana, Hindiya waxay u soo baxeen sidii maalgashi muhiim ah u leh UAE, iyo Hindiya oo ah goob dhoofinta ugu muhiimsan ee alaabada wax soo saarka UAE.
Sidee ayuu ahaa ganacsiga labada dhinac ee u dhexeeya labada dal sanadkii la soo dhaafay? Ganacsiga aan saliida ahayn ee Hindiya iyo UAE ayaa lagu qiimeeyay $ 29,023.68 $ 2007-2008. Ganacsiga laba-geesoodka ah ee loogu talagalay 2007-2008 wuxuu muujiyey kobaca boqolkiiba 40 boqolkiiba sanadkii hore. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhoofinta Hindiya laga keenay waxaa kamid ahaa shidaal macdanta, luul dabiici ah ama bulsheed, badarka, dahabka iyo waxyaalaha laysku qurxiyo, dharka wax lagu karsado, dharka, biraha, suufka, badeecadaha badda, mashiinnada iyo qalabka, balaastigga iyo alaabada liinta, shaaha iyo hilibka iyo diyaarinta. Waxyaabaha ugu waaweyn ee laga soo dejiyo UAE waxaa ka mid ah shidaalka macdanta, saliidaha macdanta, luul dabiici ah ama bulsheed, dhagaxyo qaali ah ama bir-qaali ah, biro bir ah & baaruud bir ah, mashiin koronto iyo qalab iyo qeybo ka mid ah, birta iyo birta iwm.
Qayb badan oo Hindiya looga dhoofiyo UAE ayaa laga daadgureeyay Dubai loona aado wadamada kale ee ku yaal gobolka sida Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Yemen iyo, goor dambe, xitaa wadamada Bariga Afrika. Sidaa darteed, dhoofinta loo dhoofiyo UAE waxay saameyn ku yeelan kartaa suuq weyn oo heer gobol ah oo laga helo alaabada Hindida.
Ma jiraan wax baaxad leh oo loogu talagalay kobaca sii dheeraada ee ganacsiga laba geesoodka ah iyo maalgashiga labada dal ee ka dhexeeya?
Korodhka muuqda ee ganacsigayaga laba geesoodka ah, gaar ahaan qaybta aan saliida ahayn, wuxuu ka tarjumayaa kobaca iyo qotada dheer ee labada dhaqale. Shirkadaha Hindiya iyo UAE waxay si firfircoon ugu lug leeyihiin raadinta maalgashi iyo mashaariic labada dal ah. Mashruucan wadajirka ah wuxuu ku lug leeyahay qaar ka mid ah shirkadaha ugu muhiimsan ee ka yimid India sida Tata, Reliance, Wipro, NTPC, Larsen & Toubro, Dodsals iyo Punj Lloyd. Dhinaca Imaaraatka, shirkadaha ugu waaweyn ee ka hawl gala Hindiya waa Emaar, Nakheel, DP World, iwm Bishii Oktoobar ee sanadkii hore, MoU oo u dhaxaysa Jaamacadda UAE iyo Atul Limited oo Hindiya ah ayaa la saxeexday iskaashi istiraatiiji ah oo loogu talagalay wareejinta teknolojiyadda si loo dhiso dawlad- taariikhda farshaxanka taariikhda timirta timirta ee Rajasthan.
Waa maxay tirada lagu qiyaasay dadka Hindida iyo ganacsatada ee Imaraadka?
Waxaa lagu qiyaasaa in qiyaastii 1.5 milyan oo Hindi ah ay ku nool yihiin UAE. Kuwo badn ayaa dalka ka dhoofay muddooyinkii ugu dambeeyay. Qalalaasaha caalamiga ahi wuxuu kaliya u adeegsaday inuu xoojiyo ka guuritaanka howlaha kaliya ee aan la qiyaasi karin isagoo aan saameyn xun ku yeelanin tamarta guud, kaabayaasha dhaqaalaha iyo mashaariicda guryaha ee lagu raadinayo dalka, gaar ahaan Dubai iyo Abu Dhabi, maaddaama maaliyaddu ay diyaar u tahay hadda. Mashaariicda horumarineed ee heer qaran ah. Sidaa daraadeed, xiisadda dhaqaale ee hadda jirta uma badna inay saameyn muuqata ku yeelato qoritaanka Hindida.
Muxuu yahay dalxiiska u dhexeeya labada dal?
Dalxiiska waa mid ka mid ah meelaha leh awooda wanaagsan ee koritaanka mustaqbalka, gaar ahaan dalxiiska caafimaadka. Emiratis u aadaysa Hindiya waxay horeyba uga faa'iideysaneysaa adeegyada caafimaadka Hindiya, oo ay kujiraan xarumaha ayurvedic iyo spas. Aag kale oo leh awood balaaran oo iskaashi dalxiis ah ayaa ah dhismaha iyo dayactirka hoteelada. Waxa jira awood wanaagsan oo UAE ay ku maalgelin karto waaxda dalxiiska ee Hindiya oo dhan, taas oo ka caawin doonta jiidida dalxiisayaasha booqanaya UAE Hindiya sidoo kale.
Ma waxaa jiri doona wajiyo cusub, firfircoon, weji xiriirka UAE-India mustaqbalka?
Muujinaya xaqiiqda adduunka, xiriirka ka dhexeeya Hindiya iyo UAE waxay helayaan cabbir cusub. Labada dal waxay dhiseen iskaashi xoog leh xagga ganacsiga iyo ganacsiga. Iskaashigan ayaa ah mid sii ballaaranaya, kala duwanaansho ah isla markaana u soo ifbaxaya iskaashi istiraatiiji ah iyada oo xoogga la saarayo iskaashiga dhanka difaaca, tamarta, iwm. UAE oo deris la ah ayaa mudnaan gaar ah la siin doonaa kor u qaadista xiriirkayaga.
Labada dalba waxay iskaashi ku yeelan karaan iskaashi dhinac walba ah iyo gobol ahaan xagga difaaca iyo arrimaha amniga oo waxay ku noqon karaan iskaashi dagaal ka dhan ah argagixisada iyo xagjirnimada.
Tan iyo markii UAE ay diiradda saareyso warshadaha ku saleysan aqoonta iyo iyada oo Hindiya ay u soo ifbaxday inay yihiin hoggaamiyeyaasha adduunka ee dhinaca hawada, beeraha, dawooyinka iyo tikniyoolajiyadda noolaha, waxaa jira xaddid ballaaran oo iskaashi ku saabsan wareejinta teknolojiyada, R&D iyo dhaqdhaqaaqa iskaashiga. Wadashaqaynta gaashaandhiggu waxay gaadhay heer sare iyada oo ah jimicsi hawleedkii ugu horreeyay ee Hindiya-UAE iyo shirkii labaad ee iskaashiga difaaca Hindiya iyo UAE. Hindiya waxay taageero adag ka heshay kooxda UAE arrimaha argagaxisada, qaasatan weeraradii argagixiso ee Mumbai bishii November ee sanadkii hore.
Xiriirka ganacsi ee udhexeeya Hindiya iyo UAE ayaa jiray muddo dheer. Kobcinta xiriirka dhaqaale iyo ganacsi ee Indo-UAE waxay gacan ka geysaneysaa xasillooni iyo istiraatiijiyad laba geesood ah oo udhaxeysa labada dal. Imaaraadku wuxuu ku raaxeysanayaa xiriir ballaaran oo balaaran oo xagga dhaqaalaha ah oo uu la leeyahay Hindiya, kuna saleysan danaha labada dhinac.
Mugga ganacsiga ee hadda jira ayaa sheegaya in tani ay tahay waqti xiiso badan oo ku saabsan taariikhda xiriirka dhaqaale ee UAE-India. Marka loo eego dawladda hoose ee Hindiya UAE waa saaxiibka ugu sarreeya ee ganacsi ee Hindiya ee sannadka maaliyadeed ee 2008-09, isla mar ahaantaana Tirooyinka dawladda Imaaraadku waxay muujinayaan Hindiya inay yihiin shuraakooda ganacsi ee ugu sarreeya ee 2008.
Marka loo eego tirooyinka dawladda Hindiya, ganacsiga laba geesoodka ah ee ka dhexeeya Hindiya - UAE sanad maaliyadeedkii Abril 2008 - Maarso 2009 wuxuu ahaa US $ 44.53 bilyan marka la barbar dhigo US $ 29.11 bilyan isla muddadaas oo kale bishii Abriil 2007 - Maarso 2008, oo ah koror boqolkiiba 52.95% . Sida laga soo xigtay tirooyinka dawladda UAE, 2008 ee UAE - Ganacsiga laba geesoodka ah ee Hindiya wuxuu kacay boqolkiiba 0 48 oo ka yimid 2007 si uu u gaaro ku dhawaad ​​US $ 32 bilyan, taas oo xisaab ahaan boqolkiiba 15 wadarta guud ee ganacsiga shisheeye.
Dhoofinta Hindiya ee UAE inta badan waxaa ka mid ah qurxinta iyo dahabka, khudradda, khudradda, khudradda, alaabada injineernimada, shaaha, hilibka iyo diyaarinteeda, bariis, dharka iyo dharka iyo kiimikooyinka. Soo dejinta Hindiya laga keenay Imaaraatka badanaa waxaa ka mid ah badeecada cayriin & batroolka, dahabka iyo qalinka, luul, dhagaxa qaaliga ah iyo kuwa biraha leh, biraha & qalabka birta ka sameysan, alaabada elektiroonigga ah iyo qalabka safarka.
Maalgashiga UAE ee Hindiya ayaa sidoo kale laga dareemay koror muhiim ah sanadihii la soo dhaafay. UAE waxay India ku maalgalisay lacag ka badan $ USD $ 5 bilyan iyada oo loo marayo FDI (Foreign Direct Investment) iyo FII (Maalgashiga Hay'adaha Dibadda) taas oo ka dhigaysa UAE mid ka mid ah maal-gashadeyaasha ugu sarreeya Hindiya. Shirkadaha ugu waaweyn ee UAE maal gashaday India waa DP world, Emaar Group, Al Nakheel, ETA Star Group, SS Lootah Group, Emirates Techno Casting FZE, Maamulka Maalgashiga RAK, Damas Jewelery iyo Bangiga Ganacsiga Abu Dhabi.
Hindiya sidoo kale waa maalgaliyaha saddexaad ee ugu weyn ee Imaaraatka. Shirkadaha Hindiya sida L&T, Punj Lloyd, Hinduja Group, Pioneer Cement, Oberoi Group of Hotels, waxay ka fuliyeen mashaariic UAE. Ka dib soo ifbaxa Imaaraatka sidii xarun dib-u-dhoofis weyn, shirkadaha Hindiya waxay u soo baxeen inay yihiin maal-gashadeyaal muhiim u ah aagagga ganacsiga xorta ah sida Jebel Ali FTZ, Madaarka Sharjah, Xeryaha Xoriyadda ee Xamar iyo Magaalada Abu Dhbai.
Sababta aan la garan karin ee xiriirka dhaqaale ee xoogan ee Indo-UAE waa dad aad u tiro badan oo Hindi ah oo ku nool UAE. Ku dhawaad ​​2 milyan oo muhaajiriin Hindi ah ayaa hada ku nool kuna shaqeeya gudaha UAE, kana kooban in kabadan boqolkiiba 30 tirada guud ee shacabka isla markaana ah kooxda ugu badan ee Imaaraatka. Bulshada qurbaha sidoo kale waxay gacan ka geystaan ​​dhaqaalaha Hindiya. Isugeynta xawaaladaha Hindiya laga soo diro UAE ee ku yaal 2008-09 waxay ahayd qiyaastii USD 10 -12 bilyan, taas oo ku dhawaad ​​saddex meelood meel dhammaan lacagaha laga soo diro waddamada GCC ilaa Hindiya oo qiyaastii ah $ USD 32-25 bilyan.
Xiriirka hawada ee labada dal
Waxaa jira duulimaadyo ka badan 475 usbuuc kasta oo u dhexeeya meela kala duwan oo India iyo UAE ah, oo ay wadaagaan Emirates, Etihad, Air Arabia, Kingfisher, Jet Airways, Air India iyo Air India Express. Saddexdaas diyaaradood oo kuwa duulimaadka ah ee Imaaraadka Carabta ah (Emirates, Etihad iyo Air Arabia) waxay shaqeeyaan qiyaastii duullimaadyo 304 toddobaad kasta taasoo u dhiganta ugu dhawaan 64% wadarta duulimaadyada ka shaqeeya qaybtaan.
Hindiya iyo Isutagga Imaaraatka Carabtu iyaguna waxay leeyihiin Heshiis Adeegga Hawada (ASA). Heshiisku wuxuu u oggolaanayaa labada dal inay u xilsaartaan tiro kasta oo duulimaadyo ah hawlgallada ay labada dhinac ku wada heshiiyeen kaasoo ay waddammada kaladuwani siin doonaan oggolaansho iyo oggolaansho habboon.
Waxbarashada & Horumarka
Adkee iskaashiga u dhexeeya hay'adaha waxbarasho ee sii kordheysa ee UAE iyo jaamacadaha Hindiya iyo xarumaha cilmi baarista sare. Dhiirrigelinta iskaashiga sayniska, oo ay ku jiraan meelaha tamarta la cusboonaysiin karo, horumarin waarta, beero qalalan, bey'ada, horumarinta magaalooyinka iyo daryeel caafimaad oo sareeya.
Sheikh Zayed - Hogaamiyaha Aasaasay
Amiirkiisii ​​Sheekh Zayed bin Sultan Al Nahayan, oo ahaa aasaasihii Imaaraadka, wuxuu ku dhashay 1918 magaalada Abu Dhabi. Wuxuu ahaa kii ugu yaraa afarta wiil ee Sheekh Sultan bin Zayed, kaasoo xukumayay Abu Dhabi min 1922 - 1926. Sheekh Zayed wuxuu qoyskiisa uga soo guuray Abu Dhabi una dhaqaaqay magaalada Al Cayn, halkaas oo uu ku soo qaatay waxbarashadiisii ​​diinta, wuxuuna bartay mabaadii'da Islaamka, wuxuuna bartay Qur'aanka Kariimka. Sheekh Zayed wuxuu jeclaan jiray fal-abuurka wuxuuna ku raaxeystay ugaarsiga iyo cayaaraha kale ee dhaqameed sida geela iyo orodka fardaha.
1946, Sheekh Zayed waxaa loo magacaabay taliye aagga bari ee Abu Dhabi (Al Ain) iyo muddadii 20 sano ee uu talada hayey Al Ain, wuxuu ka gaabsaday wax dadaal ah oo ku saabsan horumarinta iyo casriyeynta tuulooyinka aagga.
1966, Sheekh Zayed wuxuu noqday Amiirkii Abu Dhabi iyo intii uu ka shaqeynayay horumarinta imaaraadka, dhisidda iskuulo, isbitaallo iyo wadooyin, aragtidiisa siyaasadeed iyo aragtidiisa mustaqbalka ayaa u weecday inuu midnimo la yeesho safaaradaha deriska la ah gacanka carbeed. Wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee ku dhawaaqo dhismaha Imaaraatka Carabta isla markii Britain ay ku dhawaaqday inay ka go'ayso gobolka. Bishii Diseembar 2 nd, 1971, Sheekh Zayed iyo taliyayaashii lixda safaaradood ee dariska ah waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeen Imaaraadka Carabta iyo riyadii Sheekh Zayed inay rumowday.
Tan iyo markii la aasaasay, Sheekh Zayed wuxuu la shaqeeyey walaalihiis, hogaamiyayaashii amiirrada, xagga casriyeynta dalka iyo u rogida mid ka mid ah wadamada ugu barwaaqada badan gobolka. Wuxuu si xikmad leh u maareeyay dakhliga soo gala shidaalka ee dalka si kor loogu qaado heerka nolosha muwaadiniinta iyo dadka deggan UAE iyo in la siiyo nolol tayo wanaagsan. Xikmadda siyaasadeed ee Sheikh Zayed iyo aragtida caqli gal ah waxaa laga dareemay dalka gudihiisa iyo dibadiisa. Wuxuu helay aqoonsi iyo qadarin heer gobol iyo mid caalami ah oo aan hore loo arag.
Sheekh Zayed wuxuu dhintey Bishii Nofeembar 2 nd 2004, laakiin wuxuu weli ku sii nagayaa xusuusta adduunka ee hoggaamiyeyaasha waaweyn iyo quluubta iyo maskaxda dadkiisa tan iyo jiilalka soo socda.
Sheekh Khalifa Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan
Imaaraadka Carabtu waa waddan federaali ah oo madax bannaan, kaas oo la aasaasay 1971. Dadaallada wadajirka ah ee dowladdeeda waxaa loo sameeyay iyada oo loogu talagalay xoojinta barwaaqada iyo horumarka UAE ee dhinacyada oo dhan iyo in la siiyo nolosha ugu wanaagsan dhammaan muwaadiniinta UAE.
Amiinnimadiisa Sheikh Khalifa Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan ayaa loo doortay madaxweynaha Imaaraatka Carabta markay ahayd 3rd ee November, 2004 kadib markii uu dhaafay aabihiis HH Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, kaasoo ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Imaaraatka. .
Waajibaadka Madaxweynaha UAE
Madaxa golaha ugu sareeya isla markaana maaree wadahadalkiisa.
Ugu yeer golaha ugu sareeya kulanka si aad ugula xiriirto sida ku xusan qaanuunka habraacyada ee goluhu ansaxiyay qaraarkiisa gudaha. Koonsilka waa in loogu yeeraa in uu yeesho kulan markasta oo xubin ka mid ah codsado.
U yeel kulan wada jir ah oo aad la yeelatid golaha sare iyo golaha federaalka mar alla markii loo baahdo.
Saxeex oo soo saar sharciyada federaalka, go'aannada, iyo go'aannada ay ansixiyaan golaha ugu sarreeya.
Magacaabista ra'iisul wasaaraha, aqbal casilaadiisa, una ogolaada inuu iska casilo jagadiisa isagoo ogolaansho ka helaya golaha sare, magacaabid ra'iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirro, aqbalidooda is casilaadooda kana codso in uu iska casilo jagooyinkooda soo jeedinta ra'iisul wasaaraha. wasiir.
Magacaabista wakiilo diblomaasiyadeed oo ku saabsan xiriirka wadamada shisheeye iyo kuwa kale ee sare ee federaalka, iyo shaqaalaha militariga marka laga reebo madaxweynaha iyo garsoorayaasha maxkamada sare ee federaalka, aqbal is casilaadooda kana codso iscasilaadooda markii ay ansixiyaan golaha wasiirada. Magacaabista noocan ah, aqbalaada iscasilaada ama xil ka qaadistiisa waa in lagu fuliyaa si waafaqsan xeerarka iyo u hogaansanta shuruucda federaalka.
Saxeexida waraaqaha aqoonsiga wakiilada dibloomaasiyadeed ee Ururka shaqaalaha wadamada shisheeye iyo ururada iyo aqbalaada shahaadooyinka wakiilada dibloomaasiyadeed iyo qunsuliyadaha dowladaha shisheeye iyo helista waraaqaha aqoonsiga. Sidoo kale waa inuu saxeexo dukumintiga magacaabista iyo caddeynta wakiilada.
Kormeer fulinta fulinta shuruucda federaalka, xeerarka iyo go'aannada ka gaadha golaha wasiirrada federaalka iyo wasiirro karti leh.
Ku metelaa federaal gudaha iyo dibadaba iyo dhamaan xiriirada caalamiga ah.
Ku dhaqma xaq u yeelashada cafiska ama yareynta ciqaabta oo oggolaanshaha xukunnada ku saleysan qodobbada dastuurka iyo shuruucda federaalka.
Isagoo gudbinaya qurxinta iyo billada sharafta, milatariga iyo militarigaba, iyadoo la raacayo shuruucda la xiriira qurxinta iyo billadahaas.
Awood kasta oo kale oo uu siiyay Golaha Sare ama u oggolaaday iyada oo la jaan qaadaya Dastuurkan ama shuruucda federaalka ah.
Taariikh Nololeedkiisii ​​Sare ee Sheekh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
Darajadiisa Sheekh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan waa madaxweynaha labaad ee Imaaraatka, kaas oo dhismihiisa lagu dhawaaqay 2 nd ee Diseembar, 1971. Waa taliyihii lix iyo tobnaad ee Imaaraatka Abu Dhabi, kaasoo ah midka ugu weyn ee toddobada imaaradood ee aasaasay xiriirka.
Sareyntiisu waxay la wareegtay awoodda dastuuriga ah ee federaalka sida madaxweynaha Imaaraatka isla markaana wuxuu taliye u noqday amiirkii Abu Dhabi ee 3 rd Bishii Nofembar ee 2004, isagoo beddelay aabihiis, Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan oo dhintey 2 nd. ee Nofembar ee 2004.
Sareyntiisu waxay ku dhalatay magaalada 1948 ee bariga imaaraatka Abu Dhabi wuxuuna waxbarashadiisa aasaasiga ah ku qaatay magaalada Al Cayn, oo ah xarunta maamulka ee gobolka. Waa wiilka ugu weyn ee uu dhaley Sheekh Zayed Bin Sultan Al Nahyan hooyadiisna waa Hernessness Sheikha Hissa Bint Mohammed Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan.
Xiriirkiisa Highness wuxuu iska leeyahay qabiilka reer Bani Yaasiin, oo loo arko inuu yahay qabiilka hooyada inta ugu badan qabiilooyinka carbeed ee degay waxa loo yaqaan hadda maalgashiga Imaaraadka. Qabiilkan wuxuu horseed ka noqday isbahaysi ka socda qabiilooyinka carbeed, oo taariikh ahaan loo yaqaan "Bani Yas Alliance".
Sareyntiisu waxay raacday geeridii aabihiis, Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan dhammaan heerarka noloshiisa oo dhan. Booskii ugu horreeyay ee uu soo shaqeeyey wuxuu ahaa "wakiilka wakiilka ee gobolka bari, iyo madaxa maxkamadaha halkaas" bishii 18 ee Sebtember, 1966. Mowqifkani muhiimad weyn buu ku lahaa noloshiisa. Intii uu joogitaankiisu joogi jiray magaalada Al Cayn, waxaa la siiyay fursad weyn oo uu kula xiriiro muwaadiniinta UAE maalin kasta, si buuxda uga warqabo xaaladooda una caddeeyo himilooyinkooda iyo rajadooda.
Darajadiisa waxaa loo magacaabay amiir taajnimada dhaxal sugaha Abu Dhabi ee 1 st ee Febraayo, 1969 iyo madaxa waaxda difaaca. Mawqifkiisa darteed, wuxuu qaatay hoggaanka ciidamada difaaca ee safaaradda wuxuuna door muhiim ah ka qaatay horumarintiisii ​​wuxuuna ka weeciyay ciidan yar oo ilaalo u ahaa ciidan badan oo ku qalabeysan qalab casri ah.
1 st ee May, 1971, Darajadiisa Sheikh Khalifa wuxuu qabtay jagada "madaxweynaha golaha ugu horreeyay ee maxalliga ah ee amiirkii Abu Dhabi" wuxuuna la wareegey boorar ay ku qoran yihiin difaaca iyo maalgalinta golahan.
Ka dib markii lagu dhawaaqay dowlad-goboleed federaal ah, Ammaannimadiisu way sii dheertahay mas'uuliyadiisa maxalliga ah jagadaas "madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirrada ee xukuumadda federaalka, oo la asaasay bishii Diseembar ee 1973.
Bishii Febraayo ee 1974, iyo ka dib wareegistii golaha degaanka, Sare-qaadistiisa ayaa noqotay madaxweynihii ugu horreeyay ee golaha fulinta oo beddeley golaha wasiirrada oo ay kujiraan dhammaan mas'uuliyadeedii.
Intii lagu gudajiray muddadii madaxweynenimada ee golaha fulinta, Awooddiisa ayaa kormeertay oo daba-joogtay mashaariic horumarineed oo laga arkay dhammaan qaybaha imaaraadka ee Abu Dhabi. Intaa waxaa dheer, Weynaantiisu waxay si weyn fiiro gaar ah u siisay horumarinta iyo casriyeynta ee mashaariicda kaabayaasha iyo sidoo kale tas-hiilaadka adeegyada kala duwan. Wuxuu sidoo kale ku dadaaley inuu dhiso qalab maamul oo casri ah, iyo xeerar sharci-dejineed oo dhameystiran, maaddaama tani ay tahay aasaaska adag ee hannaanka horumarka bulshada iyo dhaqaalaha.
Marka lagu daro xilalka uu u magacaabay madaxweynaha golaha fulinta, Sare-qaadistiisa waxay mas'uul ka ahayd aasaaska iyo madaxtinimada Hay'adda Maalgashiga Abu Dhabi ee 1976. Awooddani waxay kormeeysaa maareynta maalgashiga maaliyadeed ee Imaaraatka iyadoo qayb ka ah aragtida istiraatiijiyadeed ee horumarinta ilaha dhaqaalaha iyo ilaalinta ilaha dhaqaale ee xasilloon jiilalka soo socda.
Mid ka mid ah dadaallada horumarineed ee weyn ee saameynta weyn ee bulsheed ee ay ku yeelatay Wanaagnimadiisa waa dhismaha adeegyada bulshada iyo waaxda dhismayaasha ganacsiga, oo sida caadiga ah loo yaqaan "Sheekh Khalifa Guddiga". Hawlaha waaxda waxay gacan ka geysteen gaaritaanka barwaaqada horumarka dhismaha ee imaaraadka ee Abu Dhabi.
Heer sarre ayaa sidoo kale la wareegey jagada ku-xigeenka taliyaha ugu sareeya ee Ciidamada Qalabka Sida ee UAE ee dowladda federaalka, halkaas oo uu si gaar ah diiradda u saaray oo uu daneynayo daneynta ciidamada. Intii lagu jiray mudadaas, si weyn ayey u dhacday heerka bixinta, tababarka iyo awoodda lagu nuugo tikniyoolajiyadda casriga ah iyo farsamooyinka horumarsan ee Weynaantiisu ay isku dayay inay siiso dhammaan waaxaha ciidammadaas oo dhan.
Tabaruc weyn ayaa laga sameeyay Sare-u-qaadistiisa xagga abuurista caqiido militari, taas oo salka ku haysa asaaska u ah siyaasada ugu sarreysa ee gobolka. Nidaamkan ugu sarreeya wuxuu ku saleysan yahay qaadashada qaab dhexdhexaad ah, ka-hortag la'aanta arrimaha kale iyo xushmeynta danaha labada dhinac sidoo kale. Ayadoo la tixraacayo jaangooyooyinkan, Ammaankiisa ayaa badbaadiyey wax dadaal ah oo ku saabsan qoritaanka siyaasad difaac oo ilaalinaysa madax-bannaanida, madax-bannaanida iyo danaha dowladda. Siyaasaddan ayaa gacan ka gaysatay gelinta Ciidamada Qalabka Sida ee UAE meel sare oo ka heshay xushmadda adduunka oo dhan.
Ka dib markii uu Sarenimadiisu la wareegeen xafiiska, qorshihii ugu horreeyay ee istiraatiijiyadeed ee dawladda Imaaraatka ayaa la bilaabay intii uu xukunka hayay. Intaas waxaa sii dheer, Sareyntiisa ayaa sidoo kale bilaabay qorshe lagu horumarinayo khibradda awooda sharci dejinta si wax looga beddelo farsamada lagu soo xuli doono xubnaha golaha dhexe ee federaalka qaab sidan oo kale ah isugu dari doona doorashada iyo magacaabista tallaabada koowaad. Marka sidaas la yeelo, tani waxay ku siinaysaa dhamaadka maalinta fursad lagu doorto xubnaha golaha iyada oo loo marayo doorasho toos ah.
Sareyntiisu waxay xiiseyneysaa howlaha isboortiga ee laga fuliyo Imaaraadka, gaar ahaan kubada cagta. Wuxuu ku dadaalaa inuu kafaalo qaado oo uu sharfo kooxaha isboortiga maxalliga ah ee gaara guulaha maxalliga, gobolka iyo kuwa caalamiga ah iyo horyaallada.
Darajadiisa Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Darajadiisa Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum wuxuu qaatay awoodiisa dastuuriga ah ee federaalka sida Madaxweyne kuxigeenka iyo Raiisul Wasaaraha UAE bishii Janaayo 5 th, 2006 kadib markii la doortey Xubnaha Golaha Sare ee Federalka iyo Xukumada Imaaraatka. Tan iyo markii la magacaabay, dowladda federaalka ee UAE waxay la kulantay dardar la taaban karo oo ah heerka guusha iyo sidoo kale koror ballaaran oo ku yimid tirada dadaallada dowladda maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah iyadoo la tixraacayo haybtiisa xoogga saareysa maalgashiga ilaha federaalka si hufan oo wax ku ool ah .
Intaa waxaa dheer, Weynaantiisu waxay soo saartay Istaraatiijiyaddii ugu horreysay ee Dowladda Federaalka ee gudaha UAE bishii Abriil 17 th, 2007, oo ujeeddadiisu tahay ugu horreyntii in la gaaro horumar waara oo dheellitiran oo umadda ah, iyadoo la kormeerayo waxqabadka hay'adaha dowladda federaalka ah iyo in la hubiyo isla xisaabtanka hab hufan. wanaaga umada iyo shacabkeeda.
Waajibaadka Madaxweynaha Kuxigeenka UAE
Madaxweyne ku-xigeenka UAE wuxuu gutaa dhammaan waajibaadka madaxweynaha UAE ee maqnaanshaha dambe sabab kasta ha noqotee.
Taariikh Nololeedkiisii ​​Sare Maxamed Sheekh Binu Rashiid Al Maktoum
Bishii Janaayo 4th, 2006, Darajadiisa Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum wuxuu noqday Maamulaha Dubai ka dib dhimashadii Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum.
Tan iyo markii uu noqday Madaxweyne kuxigeenka iyo Raiisul Wasaaraha Imaaraatka, iyo Ruler of Dubai, waxqabadka dhulka hoostiisa ayaa loosoosaaray si la yaab leh.
Sannadkii 2007 wuxuu goob joog u ahaa guulo u gaar ah Sheekh Maxamud gudaha iyo gobolka labadaba. Bishii Abriil 17th, 2007, Sheekh Maxamud wuxuu daaha ka rogay Qorshaha Istaraatiijiyadda Dowladda UAE isagoo ujeeddadiisu tahay in la gaaro horumar waara oo dalka oo dhan, laguna maalgeliyo kheyraadka federaalka si hufan oo loo hubiyo dadaal ku habboon, isla xisaabtan iyo daah-furnaan dhammaan hay'adaha federaalka.
Ujeeddada aasaaska ayaa ah in kor loo qaado horumarka aadanaha iyadoo la maalgashanayo waxbarashada iyo horumarinta aqoonta ee gobolka iyadoo la beero hoggaamiyaasha mustaqbalka ee qaybaha gaarka loo leeyahay iyo kan dadweynaha, kor u qaadista cilmi baarista sayniska, faafinta aqoonta, dhiirrigelinta hoggaanka ganacsiga, awoodsiinta dhalinyarada, cusbooneysiinta fikradda dhaqanka, dhawrista hiddaha iyo dhiirrigelinta qaabab faham oo dhexmara dhaqamada kaladuwan.